Garyaqaanka Xashiishad ee Florida - Mudane Cannabis Law - Dustin Robinson
Xeerarka Florida ee Marijuana ayaa La Sharaxay
Ka dhagayso PodCast ama Ku Daaw YouTube-ka Xeerarka Cannabis ee Florida Sharci qaas ah Florida Cannabis Qareen kaas oo aan wareysano - booqo Mr. Cannabis Law, Dustin Robinson, websaydhkiisa: Mr. Cannabislaw.com
Xaaladda Florida Xashiishka / Xeerarka marijuana
"Sharciyada Xashiishadda Florida" Waxay la il daran yihiin da 'aad u weyn iyo dadka muxaafidka ah ee wali ku leh cambaareyn aan caadi aheyn oo la xidhiidha xashiishadda cannabis, oo lagu yiraahdo marijuanaad sharci ahaan gobolka Florida. Florida waxay leedahay barnaamij culus oo marijuana caafimaad oo leh ku dhawaad ​​300,000 bukaan. Sharcinimo buuxda ee marijuana Florida gudaheeda waxay u badan tahay inay ka soo bixi doonto codaynta maxaa yeelay sharciyadii marijuanaada caafimaad ee la sameeyay - ka eeg 2022 codbixinta sharci ahaanta marijuana ee Florida.
LA XIDHIIDH BADAN: Sida Loogu Shaqeeysto Garyaqaan Xashiishad oo Meheraddaada ah
Sida laga soo xigtay sharciyada cannabis Florida ee hada, xitaa xaddiga yar ee marijuana waa sharci darro gobolkaan. Saraakiisha ayaa ku andacoonaya in haysashada 20 garaam ama in ka yar xashiyiintu ay tahay fal-dambiyeedyo anshax xumo ah. Kuwani waa qawaaniinta sharuucda xakameynta cannabis ee hadda jira.
Sidee isbedelkani u dhici doonaa mustaqbalka, oo waxaan arki karnaa waxoogaa isbeddel ah xeerarka xashiishadda Florida? Xilligan la joogo, waxaan ku arki karnaa taariikhda sharciyada xashiishadda gobolka Florida. Xashiishka caafimaadku waa sharciyey gobolkan, halka isticmaalka madadaalada ee marijuana Florida dhexdeeda wali su'aasha la weydiinayo.
Waa maxay shuruucda Florida ee Xashiishka Cannabis ee hadda jira?
Haddii aad haysatid 20 garaam ama kayar marijuana, waxaa laguugu ganaaxi karaa ganaax ugu badnaan ah $ 1,000. Sidoo kale waxaad ku heli kartaa xukun ugu badnaan hal sano ah xabsi gudaha ah. Denbi-falka noocan ah wuu ka yar yahay dambiga culus. Si aad ugu qalanto dembi culus, waa inaad lahaataa wax ka badan 20 garaam oo marijuana ah.
Cawaaqibka ayaa aad u weyn haddii aad iibiso marijuana. Tani waxay khusaysaa meelaha u jira 1,000 fuudh ee iskuul, kuleejo, baarkin, ama meel kale oo ciqaab ah oo lagu ciqaabi karo. Waxaad heli kartaa ganaax ugu badan $ 10,000 iyo ugu badnaan xukun ah 15 sano. Kuwani waa xeerarka hadda jira ee haysashada iyo keenista marijuanaada Florida.
Xeerarka ayaa hoos imanaya dib u eegista weyn, gaar ahaan sababtoo ah liiska biilasha wax ka beddeli kara warshadaha marijuana Florida. Maxkamadda Sare ee Florida waxay go'aansan kartaa inay beddesho qawaaniinta sharciyeed ee marijuana ee Florida dhammaadka 2020.
Sanadkii 2016, 70% codbixiyaasha Florida waxay doorteen sharciyeynta marijuanaada caafimaadka taas oo qeyb ka ah wax ka badalka dastuurka. Dhamaadka 2017, marijuanaad caafimaad ayaa sharci looga dhigay noocyada dawooyinka, kiniiniga, saliida, iyo geedka. Waxay ahayd tallaabo aad u weyn bukaannada Florida oo doonayey inay u isticmaalaan marijuana caafimaad xaalado caafimaad oo kala duwan.
Beerista hemp ee Florida waxay noqotey halbeeg lagu sameeyo warshadaha. Tani waxay qayb ka ahayd barnaamijka Waaxda Beeraha iyo Adeegga Macaamiisha laga soo bilaabo 2019. Tani waxay horseeday waxa loogu yeero "ruug cagaaran" ee gobolkan kaas oo u abuuray xulashooyin badan ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe.
Hadda, 2020, biilasha lagu dhawaaqay waxay taageerayaan hindisaha sharciyeeynta marijuana ee Florida. Dadaalku wuxuu leeyahay taageerayaal badan oo dadaal badan, oo sharciga rasmiga ah wuxuu ku dhowaa inuu isbeddelo.
Muxuu Ka Badali doonaa Sharciyada Florida Xashiishad sanadeedka 2020?
Waxaa jira saadaalinno aad u weyn oo ah in isticmaalka madaddaalada ee marijuanaha Florida ay suuragal noqon doonto laga bilaabo 2020. Tani waa ogeysiis ka soo baxay hindisaha marijuana rasmi ah ee Florida. Waxay sheeganayaan in isticmaalka raaxada ee marijuana laga yaabo inay wax ka badasho aragtida wershadaha oo dhan.
Shirkado badan ayaa furi doona daawooyin iyo dukaanno halkaas oo ay suuragal u tahay inay iibsadaan alaabada xashiishadda. Tani waxay kordhin doontaa fursadaha ganacsi ee beeralleyda, xoolaleyda, iyo iibiyaasha.
Isla mar ahaantaana, inta lagu gudajiro 2020, isticmaalka marijuanaada ka hooseeya xaalado wanaagsan ayaa suuragal u noqon doona dagaalyahannada. Kuwa liisanka haysta ayaa awood u yeelan doona inay koraan, baaraandegaan, tijaabiyaan, oo iibiyaan alaabada iyadoon la samaynin bartanka af-adayga. Liisaska balaaran ee cudurada ayaa lagu dari doonaa daaweynta suurtagalka ah ee lagu daweynayo marijuanaada caafimaadka. Ganaaxyada hadda jira ee haysashada marijuana waxaa dib uga fiirsanaya maxkamadda.
Dhamaan isbadaladaani waxay imaan doonaan sanadka 2020. Xeerarka cusub ee cannabis ee Florida waxay noqon doontaa isbedel weyn dadka deggan Florida ee raba inay si sharci ah u isticmaalaan marijuana.
Si dhakhso badan ayaa ufiican
Xeerarka sharci ee xashiishadda cannabis waxay keeni doontaa isbedelo waaweyn aragtida marijuana ee guud ahaan gobolkaan. Waqtigaan la joogo, 11 dowladood oo sharci u ah xashiishadda dadka waaweyn ee ka weyn da'da 21.
Mustaqbalka, waxaan arki doonnaa kororka guud ahaan heerka isticmaalka marijuana. Gaar ahaan bukaan socodka u isticmaalaya marijuana ujeedooyin caafimaad. Dadka daggan Florida waxay awood u yeelan doonaan inay marijuana u isticmaalaan ujeedooyin madadaalo haddii biilasha oo dhami talaabo qaadaan inta lagu gudajiro 2020.
Florida waxay albaabada u furaysaa isbadal weyn oo ku yimaada warshadaha marijuana, howshana wey sii kordheysaa. Beerista, baahinta, iyo qeybinta waa inay u keentaa fursado waa weyn ganacsatada iyo shirkadaha yaryar. Sharci ahaan marijuana sharci-darrada ah ee Florida, waxaan kaloo awood u yeelan doonnaa inaan isticmaalno oo aan sharci u iibsano marijuana. Tani waxay tallaabo weyn u noqon doontaa in la beddelo sharciyada cannabis Florida.
Maanta waxaan ka wada hadleynaa sharciyada xashiishadda cannabis. Dhammaantiin waad salaaman tihiin, magacaygu waa Tom Howard. Haddii aad u baahatid wax, waxaad awoodaa Google Cannabis Qareen waana waad heli kartaa. Laakiin maanta waxaan haynaa dhacdo aad u xiiso badan. Waxaan ka wada hadli doonnaa Dustin Robinson sharciyada xashiishadda Florida. Dustin, waad ku mahadsan tahay inaad nagu soo biirtay.
Qareenka Xashiiska Florida - Dustin Robinson
Haa, waad ogtahay sida doorkaas. Nasiib wanaagse waxaan qabnaa wax badan oo ka wanaagsan sidii aan ahaan jirnay. Sikastaba, taasi waa waxa dhacaya marka aad haysatid muuqaal xeebta xeebta ah. Xagee ka timid Dustin?
Waxaan halkaan joogaa Florida. Waxaan ku jiraa qoraxda South Florida. Waa cimilo qurux badan halkan.
Sidaa darteed ma gashanaysid surwaal jaakad dhogor ah sidaan halkaan u ahay maxaa yeelay waxay la mid tahay 25 digrii banaanka.
Haa, maya, way qurux badan tahay. Shalay ayaan doonta dul saarneyd. Maanta waa maalin shaqo. Qorraxda quruxda badan ee daaqadda ka baxday.
Noocee ah waxyaabaha aad ka shaqeyso cannabis Florida?
Maxaa ku Socda Sharciyada Florida ee Xashiishka
Waxaan soo helnay waxyaabo badan oo kala duwan oo halkan uga socda Florida, sida iska cad annaga oo aan xisaabinayn waxyaabahaasi waxay uga socdaan dhinaca hemp. Wax badan oo alaab ah ayaan ka helnay dhinaca marijuana. Kaliya taariikh dhaqso ah halkan Florida. Waxaan shati siiney dhowr, waxa aan ugu yeerno MMTC halkan, Xarumaha daaweynta marijuana. Kuwaasi waa liisamo isku dhafan oo halkan Florida dhexdeeda ah. Waxay shati kaheleen Waaxda Caafimaadka. Ka dib markaa intaas ka dib waxaa jiray dhowr dacwadood halkan Florida. Marka asal ahaan hadda waxaan haysannaa 22 laysan oo inta badan ruqsadahaasna waxaa lagu bixiyay heshiisyada dejinta, oo ka baxsan [crosstalk 00:01:47], dheh taas mar kale.
Taasi waa wax xiisaha leh, maxaa yeelay halkan Illinois waxay ka fakarayaan sida ay tahay inay u qorsheeyaan miisaaniyadda si ay u dacweeyaan gobolka oo ay haystaan ​​shatiyo dheeraad ah oo noocaas ah oo loo dhisay ilaa ugu sarreynta sharciga. Marka waxaan isweydiinayaa in badan oo heshiisyada dejinta ay noqon doonaan shatiyo?
Haa, waa hagaag, waxaan dhihi lahaa dowlad kasta oo sameysa wax shatiyeyn ah waxay ubaahantahay inay u qoondeyso kheyraad muhiim ah si ay u dacwooto. Waan ogahay in Missouri ay kaliya ku dhawaaqday inay guuleysteen. Waxaan la shaqeyn jiray dhowr koox oo ku saabsan codsiyada Missouri iyo qorayaasha codsiyada wanaagsan, markii ay qorayaan, wey qorayaan si ay iyagu naftooda u diyaarsadaan si ay awood ugu yeeshaan inay keenaan sabab ficil ilaa heerka ay ha helin laysan. Markaa taasi runtii waa istiraatiijiyad ay dad badani isticmaalaan. Oo halkan Florida gudaheeda liisamada ayaa si aad ah loogu qiimeeyay. Waxaan ula jeedaa waxaan haysanaa
is dhexgalka tooska ah ee Ganacsiga Xashiishka Florida
Haa. Markaa waad heli lahayd… Qaybta warqad ah waxay ku iibinaysay $ 60 milyan. Taasi waa, milki ma leh, hawlgallo maleh. Marka wax badan oo khadka ku jira, dadku dan kama qabaan bixinta $ 1 milyan oo ah khidmadda qareenka si ay isugu dayaan inay helaan $ 50 milyan oo laysan ah. Halka Gobollada kale, qiimaha liisanka laga yaabo inuusan u sarrayn. Haddii aad haysatid warqaddii qiimaha lahayd, ha noo dhaho, $ 500,000 ama hal milyan, waxaa laga yaabaa inaadan u janjeerin inaad bixiso qareen dhawr boqol oo dacwadood oo weyn. Laakiin markii liisamada ay qiimeeyaan 50 milyan, waxaad la mid tahay, “Waad ogtahay waxa, aniga waan ku wareejin doonaa.” Mararka qaarna dad kale ayaa maalgeliya dacwadaas u muuqda fursado-
Dhig. Haddase taasi ma ahan… Maya, taasi maahan run. Waa maxay goorta, sug… champerty taasi waa champerty oo nasiibdarro waxaan u baahan nahay inaan baranno qaar ka mid ah shuruudaha sharciga ah ee arcane. Marka dadku waxay ahaayeen, looma ogola inaad sidaas sameyso. Sharci ahaan waa wax, xarig iyo dayactir. Hagaag, aragtida ah inaadan ubaahneyn inaad awoodid inaad sameysid Champerty wuxuu la mid yahay dhex dhexaadinta xafladaha fogaan si aad u dhiiri galiso kiis. Hagaag taasi dayactirka tani waa. Laakiin asal ahaan waa nooc la mid ah meesha qof kale oo aan ahayn qofka la xiriira dacwadda uu dano dhaqaale ka leeyahay. Marka waxaan qiyaasayaa inay u oggol yihiin champerty Florida?
Runtii waligey maan maqal ereybixintaas. Laakiin waxaan ula jeedaa, dhamaadka maalinta, inta badan waxaa jira waqtiyo dadku leeyihiin dacwado oo iyagu ma maalgelin karaan iyaga iyo dadka kaleba waxay u yimaadaan inay maalgeliyaan dacwadda oo lagu beddelo wax. Marka haa, waxaan u maleynayaa in wax la yiraahdo champerty ay u badan tahay in diirada lagu saaro-
Oh, waxay ka timid waqtiyada feeraha ah-
Laakiin sidaa darteed waxaad u maleyneysaa inay jiri doonto wax aan hagaagsaneyn haddii aad baxeyso oo aad isku dayeyso inaad hesho dad ay dacwado gudbiyaan? Taasi waa malaha ujeedada laga leeyahay, laakiin tani waa tusaale ay dadku rabeen inay fayl gaystaan. Kaliya maahan inay caasimada ku kharash gareeyaan $ 1 milyan oo doollar. Markaa markay galeen waxay heleen maalgashadeyaal doonaya inay maalgeliyaan dacwad ay ku beddelanayaan xoogaa caddaalad ah. Kadibna waxay heleen rukhsad waxayna awoodeen inay ku tuuraan $ 55, $ 60 milyan. Marka sida muuqata hadda waxay soo saareen… Waxay dhawaan soo saareen sideed liisamo cusub oo heshiis ah. Waxaa loogu yeeraa tilmaamayaasha. Kuwani waa dad ku dhaliyay hal dhibic gudaheed habka bilowga codsiga. Marka hadda waxaan leenahay sideed shati oo ka mid ah 22ka kuwaasoo ah wax cusub oo cusub oo isku dayaya inay kor u qaadaan raasamaal si ay u maamulaan shirkad isku dhafan. [crosstalk 00:05:08] Waxay ku kacdaa $ 20 milyan.
Markaad tiraahdo toosan, waxaad u jeeddaa inay koraan, inay keydisaan, inay wax socodsiiyaan, dhammaantood waa isku mid, sax? Waana qaab dhismeedka Florida.
Haa, marka waxa Florida ku waalan waxa ay tahay inay noqdaan, waa in ay koraan, socodsiiyaan, faafiyaan oo gaarsiiyaan. Mana fulin kartid heshiiskaas mid uun. Markaa maahan sida in ay jiraan shirkado keenid ah oo sameynaya gudbinta. Hay'ad kasta shaqsi kastaa waxay leedahay adeeg gaarsiis u gaar ah. Waxaadna qiyaasi kartaa inay taasi noqon karto mid aan waxtar lahayn haddii aad leedahay laba deris oo midba midka kale midka kale dhow. Mid ayaa ka dalbanaaya mid ka mid ah meesha lagu kala qaado, kan kalena wuxuu ka dalban karaa xarun kale oo isla markaana waxaad helaysaa laba baabuur oo aad ku waddo meel u dhow dhow. Waxay macno badan samayn laheyd haddii ay jirto adeeg gaarsiis oo awood u leh inuu ka soo qaado labadaas taran ee mid ka mid ah gaariga. Markaa markaa waxa jira qaar ka mid ah isku-filnaan la'aanta iyo in ay jiraan biilal dhawr ah kalfadhiga xiga ee sharci-dejinta oo ay isku dayayeen inay xisaabiyaan. Xaqiiqdii waxaa jira maxkamad sare ee Florida, sidaa darteed maxkamadaha hoose waxay runtii u arkeen qaab dhismeedka inuu ka soo horjeedo dastuurkayaga Florida.
Waa maxay Florida, maxaa yeelay bal aan ka hadalno sida Florida ay u noqotay gobolka marijuana caafimaad.
Sidee Florida Caafimaadka Marijuana Bilaabantay
Florida marka hore waxaan leenahay qaynuun kaas oo asal ahaan kaliya aad u yar, marijuana THC aad u yar-
Waxay ka dhawaajisay wax badan sida West Virginia. Waxaan ka wada hadalnay gadaal, West Virginia, ma heli kartid ubax, xitaa ma helaysid jiilaal, wax aan la dhuuqi karin oo waa inaad socodsiisaa. Florida miyey sidaas noqotay? Ma laguu ogolaan inaad leedahay ubax?
Haa. Marka, Florida, waxaan runtii ka shaqeynayaa barnaamij West West ah hadda iyo haa, taasi waa sida ay u egtahay West Virginia. Oo haa, Florida waxay ku bilaabatay oo keliya qiyaaso aad u fudud oo aad u yar. Laakiin waxa aan asal ahaan la nimid waa, waxaa jiray wax ka beddel dastuurka. Wax ka bedelka dastuurka ayaa asal ahaan sheegay in MMTC-yada, Xarumaha Daaweynta Marijuana ay kori karaan, socodsiin karaan, gaarsiin karaan ama gaarsiin karaan. Markaa waxay lahayd ereygaas ama dastuurkayaga Florida. Kadibna sanadka 2017 markii goluhu go aansaday in wax ka bedelida dastuurka, ay ugu yeeraan… Waxay yiraahdeen waa la koray, la shaqeeyay, la faafiyey iyo in la dhiibo, asal ahaan abuurista hay'addan isku dhafan ee iskuxiran ee waajibka ku ah in dhammaantood la sameeyo.
Farqiga u dhexeeya isku xidhka iyo qasabka iyo ka soo horjeedda. Midkood waa iskudhafan midka kalena waa, Ma hubo waxa ay ugu yeedhaan.
Wadajir / iskudhac ah iyo Xeerarka marijuanaanka Florida
Haa, wax badan ayaa laga weydiiyay kiiskan maxkamadda iyo [inaudible 00:07:38] iyo qof sida, "Oh, waa mid aad u dhib badan. Uma baahni inaan ogaado sharciga sharciga ah. ” Waxaan ahay sida, "Maya, waa mid aad u fudud. Waa farqiga u dhexeeya an iyo ama. Dastuurku wuxuu adeegsanayaa ereyga ama micnaheedu yahay inaad abuuri kartid, socodsiin kartid, gaarsiin kartid ama gaarsiin kartid. Qaynuunka Florida ayaa yimid oo adeegsaday ereyga, taas oo macnaheedu yahay in loobaahan yahay in asal ahaan uu sameeyo waxyaabahaas oo dhan. ” Marka hadda maxkamadda sare ee Florida ayaa qaadaysa kiiskaas oo calaamadaha oo dhami waxay u jeedinayaan iyaga oo ku dhawaaqaya xukunka, taas oo macnaheedu yahay macnaha guud ee is dhexgalka toosan waa la jebin lahaa waana inay soo laabtaan oo ay halkan ka dhisaan qaab dhismeed siman.
Waa isku xirnaanta iyo iskudarka. Marka conjunctiva waa iyo, iyo iskudarka waa ama. Maya waan ka helay. Tani waa sida, maxaa yeelay waa xudunta xudunta. Waxaan ka hadleynaa sharciyeynta xashiishka canbaarta sharci ahaan marka loo eego aragtida siyaasadeed. Laakiin waxaa jira siyaasad badan oo ka dhexeysa wada hadalkaas. Oo sidaas oo kale sida Florida ama Illinois, waxaan yeelan doonnaa dacwado waxaadna kula dagaallami doontaa macnaha erayga ama, Waxaan ula jeedaa taasi macno ahaan waa waxa ay tahay. Oo markay yiraahdaan, “Ama,” waxaa la moodayaa inay dhexgalkaas halkaas ku jirto. Oo sidaas daraaddeed adoo isku dhex daraya ka dibna sidoo kale adoo ku dhisaya $ 100,000 dheeraad ah, $ 250,000 oo loogu talagalay dacwada gobolka si aad u degto rukhsad. Taasi waxay gelisay qiimaha shatiga xashiishadda cannabis, kaliya maahan Gobolka Florida, laakiin meel kasta oo ka sareeya sida ay ahaan lahayd ama ahaan lahayd.
Haa, haa, haa. Shatiyada laysanka waa kuwo aad iyo aad u sareeya isla markaana daacad ah, waaxda caafimaadka waxay ku bixineysaa lacag aad u badan dacwada arintan mana heystaan ​​kheyraad ay ku fuliyaan. Sidoo kale waxay ka qaadaysaa miisaaniyaddeeda inay si dhab ah u dhaqan geliso qodobbada dhabta ah ee ay tahay inay MMTC raacdo. Marka sidaa darteedna dhab ahaantii ma jiraan xoojin badan oo ay tahay in la sameeyo, kaliya sababta oo ah DOH runtii ma haysto illaha.
Maahan. Waa fahamkeyga ah in kaliya Florida ay joogaan afar ciyaartoy. Taasi ma runbaa? Jecesha imisa
Ruqsadaha asalka ah ee Florida Marijuana
Marka shatiga asalka ah wuxuu ahaa sida, waxaan u maleynayaa inay shatiyeen afar ama shan ciyaartoy. Markaa raggaasi waxay bilaabeen inay madaxooda bilaabaan suuqa. Ka dibna ku xigga in ay shatiyeen, oo hadda waxaan nahay ilaa 22 shati. Xilligan waxaa jira kaliya sideed ama sagaal si dhab ah u shaqeynaya. Sideeddaas ama sagaalkooda, afar ama shan ka mid ah ayaa runtii ah kuwa xukuma, maxaa yeelay waxay leeyihiin madax weyn.
Markaa ma jirto wax dabool ah, sidaa darteed waxa loo kala qaybiyaa iyo qaanuunku, waxay sheegeen inay ku fadhiyaan 25 sahamin. Ma aha oo kaliya inay kori karaan, socodsiin karaan oo ay baahin karaan, oo ay uga duwan yihiin Illinois halkaas oo ay ku xardheen cabbirkooda ballaaran ee 5,000 mitir oo laba jibbaaran. Florida gudaheeda, kuma lihid koritaankaaga. Kama liidid howlahaaga. Iyo baahinta, waxaad ku xadidan tahay 25 goobood. Laakiin markii aad kacdo… Sida aan u nimid… 100,000 oo bukaan oo kasta, waxaad heleysaa shan kale oo daawo-bixiye ah. Marka hadda waxaan joognaa 300,000 oo bukaanno ah. Markaa mid kasta oo ka mid ah qaybaha isku dhafan ee aasaasiga ah waxay aasaas ahaan lahaan karaan 25 oo lagu daray aasaasi ahaan 40 kuuliyayaal
Iyo sidoo kale waxaa jiray dacwado qaarkood oo runtii u oggolaanaya qaar ka mid ah liisamadaas in ay xitaa xiraan xitaa wariyayaal badan. Markaa taas waa sababta ay u tixraacaan waa shatiyada super. Oo waxay ku kacdaa lacag aad u badan oo lacag ah ma aha oo kaliya koraan, ma aha oo kaliya howsha, laakiin sidoo kale isku dayo in la furo dhammaan goobahan fidinta, sidaas.
Waxay u muuqataa in gobolka Florida uu siiyay afar qof faa'idada. Afarta-
Ma ahayn afar qof, waxay ahayd afar nin oo reer Florida ah. Ka dibna afartaas qof ma ahayn. Maaha sidii afar nin oo ag fadhiya, oo fadhiya 20 milyan mid walbana waa ay iska tuurayaan. Kuwani waxay ahaayeen inay noqdaan ururo isu yimid oo wadooyin fara badan iyo karti badan siiyay, maxaa yeelay haddii kale adigu ' ma awoodo inaan si dhakhso leh u koro.
Hagaag, waxaan ula jeedaa xitaa inaan saxo taas, xita ragga Florida ma ahan. Waana taas waxa dad badan oo reer Florida ay uga xumaadaan inay tahay in shatiyada lasiiyo beeraleyda halkan Florida isla markaana ay jiraan shuruudo qaarkood oo ahaa inay xanaano ku hayaan 30 sano. Laakiin sax markii ay heleen shatigaas waxaa laga iibiyay MSOs weyn. Marka hadda, Florida, wax badan oo dhammaan shatiyadaha shaqeynaya waxaa iska leh MSOs aad iyo aad u ballaaran oo aan lahayn wax ay sameeyaan. Maaha niman reer Florida, maaha dad reer Florida. Xitaa maahan shirkadaha Florida. Iyagu waa uun shirkado waa weyn. Laakiin waad ogtahay, difaaca beeralleyda, dad badani waxay siinayaan beeralleydan in badan oo caajis ku ah iibinta shatiyadahan. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay, iyadoo banki ahaan ay u adag tahay sidii ay ahayd iyo iyadoo si toos ah loogu dhex daray isla markaana qaali u ah inay hawl galaan, beeralleydan, qaarkood ayaa laga yaabaa inay yihiin xoolo-dhaqato hodan ah, waxay lahaan karaan hal milyan ama laba milyan, waxay ku deeqaan 20 milyan ayey haystaan.
Marka iyagu runtii ikhtiyaar uma haystaan. Ma aadi karaan bangi si ay amaah u helaan. Xaqiiqdii ma haystaan ​​wax kale oo aan ahayn inay ka iibiyaan si caddaalad ah. Taasina waa waxa ay sameeyeen. Marka, uma maleynayo inay qasab ku tahay qaladka beeralleyda. Waxay ila tahay in nidaamka oo dhami uu yara yaraa. Laakiin waad ogtahay waxa, dhamaadka maalintaa waa nidaam cusub waxaanan u maleynayaa in Florida ay dhab ahaantii sameyneyso shaqo fiican. Waxaan u maleynayaa is dhexgalka toosan inuu ka caawiyay arimo badan oo kala duwan. Laakiin waxaan u maleynayaa inaan ku jirno heer aan dhab ahaantii isku beddeli karno oo aan toosno.
Hagaag, ma waxaad u malaynaysaa… Waxaan ula jeedaa, maxaa yeelay haddii ay wax ka beddeli waayaan ama ay ku siinayaan wiilal badan, afartaas qof waxay kaliya daawanayaan beeraleyda wanaagsan oo ku fiican oo ka iibsanaysa. Waxaan ula jeedaa, gundhig ahaan waa ay heli doonaan, haddii aysan jirin wax dabool ah, maxaa yeelay halkan Washington waxaan haysannaa
Marka asal ahaan waxa aad sheegeyso, kama duwan sida Illinois oo aan ku heysanno koobab kuwan ah oo ku saabsan haynta liisanka si qofna uusan u xukumi karin warshadaha. Florida gudaheeda, waxay umuuqataa, waxayna u egtahay Washington gudaheeda inaad leedahay dhibaatada saxda ah ee kasoo horjeedda halkaad ku haysato ciyaartoy waa weyn oo ka kooban inta badan waxa socda. Hadana waa wax aan macquul aheyn in ciyaarta la soo galo.
Haa. Iyo in la caddeeyo, Florida gudaheeda ma jiro hal qof ka leh in ka badan 5% xiisaha hal shati. Marka sidaas maahan inaad awood u lahayd… Hal hay'ad Florida ka dib ayaa iibsan kara liisan kale. Laakiin haa, waxaan ula jeedaa runtii ma jiro dabool.
Maya, shatiyada waa inay kala soocaan. Marka runtii ma jirto sabab ay ugu midoobaan hal liisan. Waxaan ula jeedaa shatiga uu leeyahay $ 50 milyan oo qiimahoodu qiimeeyo. Marka maxaad ugu dari lahayd hal liisan markii aad leedahay qiimahaas badan? Marka, waxaan ula jeedaa inaad aragto qaar sida MedMen ah, kaliya waxay sameeyeen shaqo-xumo weyn halkan. Waan ogahay inay haystaan ​​qorshooyin waaweyn oo loogu talagay wariyayaashooda waxayna dad badan u daayeen. Iyo runtii inbadan oo kamid ah, MedMen iyo Surterra waxay maal galinayeen codsiyada halkaan si ay u galaan madadaalo, waxeyna sameysteen raasamaal aad u wanaagsan, sida iska cadna waxay kulahaayeen ciyaar madadaalo si ay ugu soo baxaan.
Maxaa ka socda sharciyeeynta madaddaalada Florida 2020?
Gabi ahaanba. Marka waxaa jiray laba koox oo xakameynayay Florida ka dibna waxaa jiray codsi MILF. Markaa nidaamiya Florida runtii si qurux badan ayey u bilaabatay goor hore. Dhibaatadooda waxay ahayd inaysan helin taageerada 22 shati, sidaa darteed runtii ma aysan haynin lacag ay ku helaan saxiixyada. Waxaad ubaahantahay inka badan 700,000 saxeex ah si aad ugusii hesho codbixinta halkan Florida. Oo waxay ku kaceen wax yar in ka badan boqol kun, waxay u noqotay dib u eegis maxkamadda sare, taas oo ahayd wax cajiib ah inay awood u heleen inay gaadhaan heerkaas. Laakiin markaa MILF baa timid oo waxaa maalgeliyey MedMen iyo Surterra dad badana way ku xanaaqsanaayeen afafka ay ku qornaayeen. Waan xanaaqsanahay sababta oo ah waxaan kaliya rabaa in qof walbaa wada shaqeeyo. Waa wax laga xumaado in aan midkeenba midka kale ku dagaallano haddii aan kulligeen isku imaan lahayn.
Marka hadda waxaad haysataa Sharciyo Florida oo leh 100,000 saxeex. Waxaad haysataa MILFS taasi oo leh labo boqol oo saxiix oo saxiix ah. Waqtigu wuu xumaa, asal ahaan waa inay lahaadaan xaddi lacageed ilaa Febraayo, ma ahan inay ku dhuftaan. Markaa asal ahaan way u sujuudeen. Marka waa nasiibdarro, waxay fursad u heleen inay isu yimaadaan oo waxaan u maleynayaa haddii ay isu yimaadaan waan arki laheyn inay sharci tahay. Arrinta ugu weyn ayaa ah kororka guriga. Waan ogahay inaad ku xustay bilowga showga inaad iskudayeysid inaad ku dagaallanto koxda guriga. Codsiga MILF kuma uusan jirin wax ku saabsan koritaanka guriga, si loo sharciyeeyo Florida.
Hadda waxaad tiraahdaa codsigan MILF, miyaad furatay codsiga MILF? Sababtoo ah waxaan maqlayaa MILF oo waxaan ahay, "Waxaan u maleynayaa inay aheyd inay hesho saxiixyo dheeri ah, gaar ahaan Florida." Muxuu taas u taagan yahay?
MLF Marijuana sharciyeynta Florida
Waad ogtahay waxa, waxaan ugu yeeraa codsiga MILF. Waa su’aal wanaagsan.
Waa sharciyeynta marijuanaanta Florida. [crosstalk 00:15:50] Laakiin xaqiiqda aad sheegtay MILF, taasi waa inay ahaato mid bislaaday, waa inay taas ka dib suuq geystaan, sababtoo ah [crosstalk 00:15:59] - -
Waadna heshay, waad beenisay. Haa, laakiin taasi waa nooca ay tahay meesha aad jeceshahay, “Hagaag, markaa waxaad heysataa labadan tartan [inaudible 00:16:08] waxqabadyo markaa waa adiga uun, waxaad shaqadaada laba jeer ka dhigtey mid adag. Hadana mar labaad, miyaa koritaanka guriga loogu fidin lahaa bukaannada caafimaadka iyo midkoodaba? Ama maxuu ahaa koritaanka guriga mid mid ka goray kan kale?
Marka runtii Regulate Florida wuxuu ahaa dhaqdhaqaaqa dadka caadiga ah ee qofka maalin walba runtii, runtii kaliya wuxuu doonayaa sharciyeynta marijuana. Dhaqdhaqaaqa MILF wuxuu runtii taageeray MedMen iyo Surterra waxayna u ahayd faa iidotooda inaysan ku darin wax kasta oo la xiriira koritaanka guriga. Dabcan waxay ku doodi doonaan inay ka aamuseen markay tahay koritaanka guriga oo ay uga tagayaan sharci dejiyaha waxayna leeyihiin sababihii ay uga baxaan guriga inay ka baxaan. Waxay yiraahdeen waxay adkeynaysaa wax ka badalida dastuurka iyo si aad u hesho wax ka badal dastuuri ah waxaad dooneysaa inaad si fudud u dhigto waxayna rabeen inay sii hayaan, sida codsiga MILF uu ahaa mid aad u fudud, aadna u gaaban. Xeerarka arjiga Florida aad ayuu u dheeraa iyada oo qaddarin aad u badan ay kujirto, so-
Su'aasha aan ka qabtay Florida iyo sidoo kale Washington State waxay lamid tahay iyo [inaudible 00:17:11] maahan. Waxaan filayaa inay tahay laba qaybood oo su’aal ah. Marka hore, golaha sharci dejinta Florida ma run ahaantii falkooduu isu keeni karaa oo wuxuu samayn karaa qaynuun? Sababta oo ah markaad ka hadlaysid waxqabadka codbixinta, tani waxay noqonaysaa qayb labaad. Waxaad saaraysa waxa ay tahay in dastuurka wax laga beddelo taasna badanaa waa mid aad u gaaban. Ayaa taas u tarjuma, oo sameeya sharciyo si ay dhab ahaan u noqon karto sharci-dejin sida aan haysanno ama u baahan tahay xashiishadda oo ah warshado?
Haa. Marka hadda waxaan haysanaa Senator Jeff Brandes oo soo saaray sharciga Senate 1860 kaas oo loogu talagalay isticmaalka dadka waaweyn, runtii wakiilkii aqalka sharci ee ugu dambeeyay Michael Grieco, wuxuu runtii sameeyay biil madadaalo sidoo kale. Wuu ogaa in taasi aysan jirin, waxaan saaxiibo nahay Michael, wuxuu ii sheegay runtii in aan la soo qaadin. Laakiin wuxuu rabay inuu farriinta diro, "Hey, tani waa wax aan ugu yaraan dooneynno inaan qeyb ka nahay wada hadaladii sanadkii hore." Marka sanadkaan Jeff Brandes wuxuu gudbiyay sharcigan 1860. Waa biil wanaagsan. Waan taageersanahay. Waxay leedahay, Waan ogahay inaan wax badan ka wada hadalnay qaybaha sinnaanta bulshada ee qaynuunka Illinois. Waxay leedahay qayb, waxay u oggolaaneysaa in la sii daayo waxyaabaha dambiga galay. Sidaas ilaa xad in ay jiraan qaar ka mid ah sinnaanta bulshada halkaas-
Laakiin ma siineyso wax dhibco ah codsadayaashu inay ku qabtaan xashiishadda ama wax kasta.
Sida saxda ah, haa. Waxaan ula jeedaa in laga baxo gudaha Illinois, sida aad ogtahay, waxaad heleysaa 20% dhibcaha haddii aad dalbaneyso qof leh lahaansho iyo xakameyn qeybtaas. Markaa waa dhibco tiro badan. Marka qof kasta oo aan ku dalbanin sinnaanta bulshada aad buu u badan yahay, fursad uma heystaan. Markaa wax dhibco ah ma aysan qoondayn. Dabcan-
Adigu waad ku xidhan tahay inaad ciyaarto, waa qaab shati shati tartan leh.
Haa, xaqiiqadduna waxay tahay in hadda oo uu la jiro sharci-dejiyeheena muxaafidka ah hadda, waxaa jira suuragal aad u yar oo ay ku dhex mari karto sharci dejiyaha. Xaqiiqdii waxay u badan tahay iyada oo loo marayo wax ka beddelidda dastuurka. Laakiin waad ogtahay waxa, warshadan, waligaa ma ogid. Marka waad ogtahay, waxaan ku rajo weynahay. Sida iska cad waxaan isha ku hayaa dhaqdhaqaaqa biilkan. Iyagu kalfadhiga way ku jiraan markaa way kulmayaan oo kaala hadlayaan.
Waxay u badan tahay inuusan ku dhamaan doonin qaabkii uu hada kujiro. Waxay u badan tahay inay marayso dib u eegisyo badan oo kaladuwan illaa ay ka baxeyso oo la oggolaado. Laakiin waa fursad weyn. Iyo waxa runtii xiisaha leh ee sidoo kale waa, wax weyn oo ka jira Florida waa is dhexgalka tooska ah. Looma oggola inay wax heshiis ah la galaan. Marka laga soo bilaabo koritaanka, socodsiinta, faafinta, runtii kuma fulin karaan adeegyadaas midkoodna.
Sharciga Guurtida ee 1860 wuxuu si cad ugu oggolaanayaa inay qandaraas ka galaan kuwaas. Markaa taas micnaheedu waa in ay jiri doonaan bixiyeyaal adeeg-bixiyeyaal ah oo imminka iman kara oo qandaraas la geli kara shirkadahaan shatiga leh. Marka dad badani waxay u baahan yihiin inay fahmaan illaa xad ay doonayaan inay gaadiid ku qaadaan, waxaa jiri doona fursado shirkadaha ay ku soo baxaan oo ku takhasusay dhoofinta xashiishadda oo aan hadda laga heli karin Florida hadda.
Waxaad sheegatay inaad tahay siyaasi muxaafid ah, markii aan u maleynayo Florida, waxaan u maleynayaa dadka da'da ah iyo muxaafidka iyo lacagta oo dhan inay ku jiraan. Waxaan ku noolaan jiray Jersey, marka waxaan aqaanaa maskaxda dadka iyo waxa aan ahayn. Miyaad u malaynaysaa inaad tahay degane ahaan maxay tahay iyo inaad tahay qof fiirinaya siyaasadaada, ma jiraan wax badan oo gadaal ka riixaya Big Pharma? Waxaan ula jeedaa, sida ay dad badani u gaari la 'yihiin tirada codbixintaada da'da ah, maxaa yeelay qofka muxaafidka ah, waxaan ula jeedaa, waxaan sameyneynaa marijuana inay noqoto mid aan caadi ahayn. Maahan, waxay la mid tahay cadarka. Way ka wanaagsan tahay khamriga. Waxay u egtahay ugu dambeyntii markaan gaarno sharciyeynta aan dhammaanteen rabno, waxay noqon doontaa, waxaad u iibsan kartaa sida broccoli, sax? Sida rodol 50 sentimitir ah, maxaa yeelay dad badan ayaa koraya.
Aynu ugu yaraan ku soo jiidanno xariiqda vodka, sida kaararka [inaudible 00:21:09]. Waxay noqon doontaa warshado ay qaali tahay markale. Laakiin waad geli kartaa.
Hagaag, fiiri, hadaad u fiirsato heer federaal, waxaad arki doontaa in labada dhinacba ay bilaabayaan inay iskugu yimaadaan arimahan. Waxaanna u malaynayaa inaad bilawday inaad taas ku aragto Florida, taasna waxaad ku arkaysaa gobollo badan oo kala duwan. Marka waxaan u maleynayaa taariikh ahaan, sida iska cad inay ahayd muxaafidnimadu inay ahaayen… oo bal eega, ma lihi wax ka dhan ah muxaafidnimada. Aniga run ahaantii, anigu waxaan ahay is-ilaaliye, waxaan u codeeya arrimaha. Laakiin arrintan, gaar ahaan way daalan yihiin, laakiin inbadan oo kamid ahi way wareegeen. Waxaan la hadlay in badan oo ka mid ah sharci-dajiyaasha xisbiga muxaafidka ah ee wareejiyay, oo iyagu waa rumaystayaal. Waxay la hadleen qaar ka mid ah dadka da'da ah ee aan ku leennahay Florida. Way fahmeen faa'iidooyinka daawada. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta aan la shaqeeyo ayaa runtii codkooda ka dhagaystay Tallahassee oo ku taal gobolkayaga, so-
Miyaad u malaynaysaa in farriinta… waan ka xumahay, kee baad u maleyneysaa inuu dadka reer Florida wax badan ka weydiinayo shuruucda marijuana? Farriinta ku saabsan sida ay u fiican tahay, dawo wax ku ool ah, ama farriinta ay u wanaagsan tahay ganacsiga. Sababtoo ah markii aan u maleynayo Florida, waxaan u maleynayaa muxaafid, laakiin waxaan u maleynayaa, "Haa, laakiin waa ilaalin ganacsi. Way daneeyaan waxa ay qabanayaan. Waxay daneeyaan tiradooda. ”
Waa hagaag sababtaas oo fariin kasta oo aad isugu dayeyso inaad u gudbiso, u fiiriso, dugsiga sharciga marwalba lagu baro inaad baratid cidda dhagaystayaashaagu tahay. Taasina waa hal shay oo anigu aad ayaan u ahay… Marwalba waan aqaanaa dhageystayaasheyda. Waa inaad ogaataa haddii aad lahadleyso qof sahlan ama aqoonyahan, qof fahmaya dhaqaalaha, qof aan fahmin maaliyadda. Waa inaad fahanto cidda aad la hadlaysid. Hadana haa, waxyaabaha ka soo horjeedda dadka muxaafidka ah ayaa ah in kani yahay wax lacag lagu sameeyo. Waxaa jira fursado badan halkan. Doolar canshuur badan oo aan heli karno, dabcan ma dooneynno inaan sameyno khaladaad ku dhacay Kaliforniya iyo qaar ka mid ah Waddamada kale annaga oo canshuur badan.
Laakiin waxaa jira fursado badan oo ganacsi oo aan u maleynayo in ay xoogaa isweydaarsadaan kooxaha muxaafidka ah xoogaa. Laakiin sidoo kale waa muhiim had iyo jeer in laga hadlo qaar ka mid ah naafooyinka. Caqabada kale ee halkan ka taagan ayaa ah qaar badan oo ka mid ah dawladaha sida dhabta ah u mamnuucaya qaybinta kaasoo loo oggol yahay qaanuunka gobolkeena. Marka waxaan qabtey howlo badan oo heer degmo ah sidoo kale, waxaan barayay qaar ka mid ah saraakiisha maxalliga ah sababta ay tahay inaysan u mamnuucin. Waxaana iska cad in badan oo taas ah oo ku saleysan dhaleeceynta. Kaliya waxay tahay wacyigalinta dadweynaha iyo isku dayga
Marijuana iyo saamaynta NIMBY, ma aha saameynta aan ku leeyahay daaqadda dambe.
Laakiin aan dadka barno hadda iyo aniga oo aan dadweynuhu nahay, maxaa yeelay waxaan ka imid Illinois halkaas oo aan loo oggolayn inaan sameyno dadaallada codbixinta oo wax looga beddelayo dastuurkayaga. Sidee u qaadataa wax ka bedelka yar ee yar ee ay ku ridayaan halkaas oo aad u abuurtaa dhar dhan tareen sharci dejin ah oo ay ku jiraan qaanuunno maareyn si aad shati uheysato una nidaamiso warshadaha xashiishadda? Ama warshadaha marijuana ee Florida?
Waa hagaag waxay ku bilaabmaysaa codsi, markaa waa inaad qabtaa qoraalada codsiga, iyo sidaan u idhi, Codsiga sharci u dejinta Florida wuxuu ahaa mid aad u dheer. Xaqiiqdiina markii aad taas gudubto, waxaan filayaa inaad ubaahantahay in ka badan 90,000 saxiix. Maxkamadda Sare markaa waxay sameyneysaa dib u eegis maaliyadeed waxayna dib u eegaan luqadda, luqadda wax ka badalida dastuurka waxay ubaahantahay inay si cad u muuqato runtiina waxay ubaahantahay in hal mowduuc laga wada hadlo. Khasab kuguma aha inaad kahadasho mowduucyo badan. Markaa waad ogtahay, mar hadii aad dhaafto dib u eegista maxkamada sare, inaad hesho saxeexyada codbixinta, waxaad ubaahantahay inaad hesho sida 766,000 saxeex ama wax la mid ah.
Markaa waxay ku dhacaysaa codaynta, waa inaad u codeysaa. Markaa golayaasha sharci dejintu waa inay galaan oo waxay ku qasbanaadeen [inaudible 00:24:45] qawaaniinta la jaan qaada dastuurkaas. Xaqiiqdiina waa waxa kiiska Maxkamadda Sare ee Florida ay ku saabsan tahay meesha uu sharci dejiyaashu yimid. Waxaana iska cad dastuurka Florida inuu ka sarreeyo sharciga Florida. Oo markuu khilaaf yimaado inta u dhaxaysa Sharciga Florida iyo Dastuurka Florida, waxaa jira arin oo sharcigaas loo arki karaa mid dastuuri ah. Taasina waa xaaladda aan hadda ku suganahay.
Waa ay dhacdaa, waana wakhti dheer in aan joogo Xeebta Bari. Fasaxa gu'ga miyaa wali wax ka sarreeyaa nin? Si la mid ah Daytona iyo waxa oo dhan oo wali wax jira?
Gabi ahaanba. Waxaan ku noolahay xeebta Fort Lauderdale sidaa daraadeed haa, kaalay wakhtiga Maarso, halkan waa waalli. Waxaan isku dayayaa inaan ka fogaado xeebta waqtigaas.
Markaa, arag, doodda in la sameeyo halkan daqiiqaddan, sax? Sababta oo ah waan xasuustaa, oo waxaan ula jeedaa xinjiraha duurka ayaa dhaca
Xaraash duurjoogta ah. Oo waxaa sii shiday Jimmy Buffett oo leh Sunterra ama Surterra, waa mid ka mid ah shirkadaha in… Marka Buffett uu waxoogaa tallaabo ka qaaday suuq cannabis Florida.
Haa, Surterra way ku lug leedahay, oo waxaan kuu sheegayaa, xeebta, mid ka mid ah Deerfield, ayaan kula hadlay dhagaysiga Deerfield markii ay raadinayeen mamnuucida daawada marijuana iyo waxa run ahaan xiisahooda soo baxay markii ay MedMen iibsadeen goobta xeebta ku taal. . Iyo MedMen, iyagu waa madadaalo, diiradda ay saaraan, marka aad ka eegto iyaga xagga suuq-geynta-
Haa, waa ciyaar yaasha cannabis ee guryaha lagu raaxeysto, sidaa darteedna waxay ku fikirayeen, "Oh, shan sano ayaa laga bilaabo hadda dhammaanteen waxaan yeelan doonnaa dhul ballaaran, waan dhageysan doonnaa reggae, way fiicnaan doontaa.
Xeebta dhexdeeda, ku qaboojinta Deerfield Beach. Taasina waxay ka baqay inay ka baxaan dadka Deerfield. Oo waxay runtii ku dhammaadeen sameynta mamnuuc ka dib xaqiiqda. Markaa MedMen ayaa markaa heshay goobtoodii, laakiin runtii way mamnuuceen. Aniguna runtii waxaan u maleynayaa in go'aankaasi dhab ahaantii ahaa mid ka soo horjeedda waxa loo oggol yahay in lagu sameeyo Qaanuunka Florida. Qaanuunka Florida uma ogolaanayo inay dhigaan… Haddii ay oggol yihiin inuu mariyo marijuana, ma saari karaan daboolka. Iyo waxaan aaminsanahay inay dhacday haddii aad aqriso daqiiqadaha dhageysiga dhageysiga ee kulanka Deerfield, tanina waxay ka dhacdaa dhammaan degmooyinka kaladuwan, runtii saldhiggooda ay u rabaan inay ku mamnuucaan kaabayaasha ayaa ah inay u maleynayeen inay iyagu horayba uga filnaadeen.
Markaa haddii qaanuunku kuu oggolaan maayo inaad daboolka ka dhigto dhinaca hore ee qaddarka weelka, maxaa laguu oggol yahay inaad u oggolaato qaar ka mid ah wershadaha kala duwan kadibna aad dhahdo, "Waa hagaag, waan haysannaa, hadda waanu mamnuucaynaa . ” Asal ahaan waa sheyga qaab ahaan. Waxaa muhiim ah inay sameyaan isla wixii. Marka haddii MMTC ay doonayso inay la dagaallanto xayiraaddaas, waxaan u malaynayaa inay leeyihiin kiis fiican oo qurux badan.
Waxay aniga iigu muuqataa inay waalli ka tahay Florida dhammaan meelaha ay siyaasiyiintan asinine ka hortagayaan marijuana xeebta. Tusaale kasta oo xun waxaan xasuustaa ku soo koray wixii ka dhacay Florida ama Atlanta ama dhammaan shucuur xumada, ugu yaraan ciidaha munaasabadaha guga ayaa khamriga lagu shiday. Ma waxaa lagaa rabay in ay dhacdo xunxun ka dhacdo magaaladaaga fucking khamriga kahor intaadan oran, "ok, aan fursad u siino haraaga fuck."
Markii uu Phish sameeyay Big Cypress si uu u dhawaaqo sanadka cusub, oo aan u jeedin sida, "Oh ilaahayow, waxaa jira riwaayad Phish ah oo soconeysa todoba saacadood xeebta, waddo aad ugu jeceshahay Florida." Maya, waxaan ula jeedaa, laakiin dhaleeceyntaasi waa nin dhab ah. Dhaleeceyntaasna waa mid baahsan. Hadana haddii ay tahay meesha dadku u tagaan hawlgab, waxay sidoo kale la mid tahay da'da. Marka waxaan ula jeedaa taasi waxay noqon kartaa
Laakiin waxaan ula jeedaa, waad aragtay inay dhacday.
Hadana sidaas oo kale socdaalkiisii ​​Tuna Dalxiis, wuxuu runtii halkaas ka baxay isagoo isku dayaya inuu aado tuulooyinka oo uu jebiyo dhaleeceyntaas, but-
Laakiin waxaad arki dhabta ah
Xitaa dhaleeceyntaasi wey xambaarsan tahay. Waxaan bilaabayaa inaanan mawduuc ka gaarin, laakiin waxaan bilaabayaa inaan si aad ah ugu lug yeesho dhaqdhaqaaqa boqoshaada psilocybin waxaanan runti bilaabay isbuucii aan faa'idada ahayn. Waxaan la imaan doonnaa websaydhkeenna bisha Febraayo, laakiin faa'iido-aan-macaashkeenu wuxuu diiradda saarayaa adeegsiga cilmi-baaris caafimaad iyo mid xagga diinta ah si aan u wadno dib-u-habeyn sharci ah oo boqoshaada psilocybin ee Florida. Waxaan horeyba qol muhiim ah u sameysanay. Laakiin caqabadda mar labaad waa dhaleeceynta.
Waa isla sheyga xashiishadda cannabis, waa inaad ka adkaato dhaleeceynta oo aad iskaa u tidhi naftaada, aalkolo, waxaad leedahay dad aad u badan oo aad u cabba una dhinta khamriga-
[inaudible 00:28:52] kun sanadkan.
… Qofna uma dhinto cabitaanka xashiishadda iyo qofna kama dhinanayo qaadashada boqoshaada psilocybin. Hadda waxay sameyn karaan go'aano xun oo waxaan u maleynayaa in sababtaas aan u dhahayo inaan u baahanahay inaan sameyno dib u habeyn sharci oo mas'uul ah. Dad badan ayaa u qaadanaya meel gaar ah laga yaabee. Markaa dadku waxay ku hor lugeeyeen gawaarida iyo baabuurta badan
boqoshaada psilocybin & sharciyeynta Marijuana
Xaq, laakiin sababta oo ah waa xannibaadda hallucinate, laakiin waxay umuuqataa inay leedahay guryo caafimaad. Si kastaba ha noqotee, oo anigu iskuma xidhnayn, ka hor intaanan u soo jeesan dib-u-dhigistayada xagga sharciga marijuanaanka Florida, runtii si kooban, maxaa loo qorsheeyay psilocybin marka la eego Sharciga Maandooriyaha La Xakameynayo?
Psilocybin taariikh dheer ayey ku leedahay dhaqankeena. Oo waxa xiisaha leh ayaa ah inay dib u laabato, waxaad fiirisaa qabiilooyinka, dhamaan qabiilooyinkii waaweynaa ee ay wali qabanayeen qaarkoodna runtii waa loo oggol yahay inay ku qaataan alaabooyin sida Ayahuasca Burner dartiis iyo waxyaabo la mid ah. Laakiin cilmi baaris ayaa la sameeyay. Xaqiiqdiina sidii aan ku soo galay, taas oo aan u maleynayo inay runtii tahay mid xiise leh ayaa ah ku dhawaad, maahan macaamiishayda oo dhan, laakiin tiro badan oo ka mid ah macaamiishayda xashiishadda ayaa aad u daneynayey helitaanka psilocybin waxayna xiiseyn jireen inay raasamaal dhigaan, kor u qaadaan raasamaal oo ay bilaabaan. samaynta xoogaa wax ah, ha noqoto gudaha Jamaica. Denver ayaa kaliya go’aansaday. Oakland waa la xukumay, dhab ahaantiina Chicago ayaa sidoo kale go'ay. Vermont waxay leedahay biil. Oregon wuxuu helay codsi dastuuri ah.
Aniguna sidaas ayaan ku helay weydiimahaas. Ka dib si daacadnimo ah anigu uma aanan xiiseyneyn, maxaa yeelay waxaan moodayay inay tahay nooc kaftan. Aniga qudhaydu maan qaadan cilmi nafsi. Marka waxaan runtii la hadlay qaar ka mid ah dhakhaatiirtayda aan matalo waxaanan kahadlay ilaa 10 ilaa XNUMX dhakhtar, gacantana hoos imaada, midkastoo kamid ah wuxuu rumeysanyahay qiimaha daawada. Markaa kadib waxaan bilaabay inaan sameeyo cilmi-baaristeyda oo waxaan bilaabay inaan la hadlo qaar ka mid ah xoolo dhaqatada iyo daaweeyaha oo ku sugan Jamaica. Markaan lahadlayo dhakhaatiirta maskaxda ee halkan jooga ee isticmaalaya ketamine, qaar ka mid ah dhakhaatiirta maareynta xanuunka ee isticmaalaya ketamine. Aniguna waxaan aaminsanahay intaas oo ka badan qiimaha dawada ee boqoshaada psilocybin inta aan ka helo xashiishadda. Caddaynta ay haystaan ​​waa mid aad u weyn. Oo xitaa FDA waxay bilaabaysaa inay gadaal ka hesho. Marka xaqiiqdu waxay ka timid aragtida FDA oo laga aqbalay xashiishadda.
Laakiin waxaad ka hadlaysaa sida qaadashada micro, xitaa sida qolalka. Waan ogahay nin halkan jooga, wuxuu ku dhejinayaa kaabsal oo waxaan ula jeedaa, waxaan xasuustaa markii aan ahaa cunug, inaad tahay nin jaamacadeed, waad guursan kartaa lamaane, waxaan u sameeyay madadaalo. Sida oo kale waxay noqon doontaa habeen wanaagsan, sababtoo ah wax badan ayaan qaatay. Oo waxay u faa'iido leedahay daawo ahaan. Waxaan ula jeedaa, waxaad ku hadlaysaa waxyaabo dabiici ah. Wax walba ayaa na caawin kara, sax? Xitaa xiitaa iyo dhammaan shit kale oo dhan, waa all-
Hagaag, hal shay oo aan isleeyahay runtii waa muhiim. Mar kasta oo aan ka wada hadlo safarka qof ee boqoshaada psilocybin, dhammaantood waxay ku hadlaan ku dhawaad ​​gabey sidaad ogtahay, waxay la wadaageen xoogaa maqaarkooda ah ama dhammaantood waxay leeyihiin isku mid ah [inaudible 00:31:49]. Haddii aad ka fekereyso saddexda waxyaabood ee ugu waaweyn ee ay raadinayaan inay ku daaweeyaan boqoshaada psilocybin waa niyad-jabka, PTSD iyo qabatinka. Oo haddii aad runtii ka fikirto waxa saddexdaas shay yihiin, waxa jira wax maskaxda ka dhacaya, waxaa jira wax xannibaya. Wax uun baa halkaa ka jira. Iyo waxa boqoshaada psilocybin sameyso, miyay kuu ogolaaneysaa inaad taas daadiso oo aad maskaxdaada u furdid oo aad hesho aragti ballaadhan oo aad runtii maskaxdaada dib u gasho. Waana taas waxa ay ka sameynayaan gudaha Jamaica. Waxaa jira xarumo badan oo daaweyn ah oo aad u baxda oo aad aado oo aad sameyso toddobo maalmood oo laab laabasho ah iyo wixii la mid ah [crosstalk 00:32:23] -
Waan ogahay waxaan samaynayo kadib markii xilliyadeenna dalabku dhammaado halkan Maarso-
Laakiin waad ogtahay, inay tahay wax la aqbali karo in la qaato kiniin budhcad ah oo kaa dhigaya inaad sidatid sida Xanax oo aan kiniiniga ka soo horjeedin, nooc ka mid ah mashiinnada boqoshaada-
Ama mid loo yaqaan SSRI, qofkaas ganaax, laakiin waxaan u maleynayaa sharciyeynta xashiishadda ee Florida, Illinois, Seattle. Hadana waxay umuuqataa talaabo qaadis ama isbedelka sharciyeynta psilocybin inay waxoogaa laxiriirayaan dareenka ah in qaababkii aan u isticmaalnay qarnigii 20aad si loo habeeyo dawooyinkaan ay ahaayeen doqoniimo iyo khalad. Oo way na dhaawaceysaa bulsho ahaan maxaa yeelay waxay abuurtay walaac badan oo nugul, nolol nuglaan badan. Iyaguna runtii way kobcin doonaan taas. Waxaan ula jeedaa, waad dib u xusuusataa sannadihii 50-naadkii markii ay Flintstones ka heli lahaayeen telefishanka sigaar, sigaar ahaan uga iibinayaan carruurta. Haddana waa inaad la dagaallataa ceebta la abuuray qarnigaas si aad u sii ahaato oo aad u noqoto, “Maya, fiiri cilmi-baaris caafimaad. Maxaan sidan u yeeli lahayn?
Iyo waxa runtii xiisaha leh, waxaan lahadlayay qareeno wadanka oo dhan hogaaminaya dhaq dhaqaaqan. Guys sida Nuux Potter oo ah, oo ku sugnaa bogga Blog Psychedelic Blog illaa iyo 90meeyadii, Waxaan ula jeedaa ninkan wuxuu keenayaa macluumaad aad u badan oo ku saabsan cilmu-nafsiga iyo qaab dhismeedka sharciga ah iyo waxyaabaha la midka ah. Laakiin waxa xiisaha leh ayaa isku dayaya inaan ogaado waxa mas'uul ah, oo runtiina waxaan u adeegsadaa erayga mas'uul ah, qaab sharciyeed mas'uul ah ayaa noqon lahaa. Lama mid noqon doonto xashiishadda (cannabis), oo waxaa jira iskuul fikir oo ay leeyihiin dhaq-dhaqaaqayaal fara badan oo aysan rumeysneyn inay tahay qaab dhismeedka caafimaadka. Sababta oo ah markaad la macaamilayso qaabdhismeedka caafimaadka, oo aan kala hadlaynay Noa Potter arrintan tan iyo dhererkiisa wuxuuna ku leeyahay baloog weyn oo ku saabsan mowduucan.
Laakiin marka aad ka hadleysid caafimaadka, ama waa mid aad leedahay xaalad u qalmid ah, marka waa laguu oggol yahay inaad caafimaad ahaan ku qabatid. Ama hadaadan lahayn xaalad u qalmitaan, waxaad tahay dambiile oo dambiile ahaan looma ogola inaad sameyso. Iyo habka Nuux dareemayo iyo qareeno kale oo badan oo aan lahadlay waa in ay jirto qiimo aad u badan oo caafimaad ka badan boqoshaada psilocybin, tusaale ahaan ruuxiyan. Taasina waa sababta aan faa'iido-ii-faa'iideysiga ahi u adeegsaneyso caafimaad iyo sidoo kale cilmi-baaris xagga ruuxiga ah si aan u kaxeeyo mas'uuliyadda dibuhabaynta sharciga.
Taas oo had iyo jeer iga xanaaqeysa dhaqdhaqaaqa xashiishadda ayaa ah in ay had iyo jeer gelin lahaayeen kibosh Xuquuqda Wax ka Beddelka Kowaad. Haddii qof dhaho “Maya, waxaan aaminsanahay daroogada cannabis arrimaha diinta awgeed waana xaqkeyga inaan ku dhaqmo diinteyda sida aan rabo inaan u dhaqmo.” Oo weliba waxay odhan jireen, Waa kaas.
Xashiishada iyo boqoshaada labadaba, waa arin wanaagsan. Sababtoo ah waxaan ula jeedaa, dadku way xumeeyaan laakiin isla isla markaa dadku waxay qaadan karaan wax badan oo noloshooda ayaa ufiican. Waan ciqaabnay, Mareykanka wuxuu la silcayaa waxa aan jeclaan lahaa inaan u maleeyo inuu la mid yahay cudurka Daaciga Gabdhaha Dareenka, sax? Waxaad ka dhigtay mid walwal geliya waxaadna ku haysay qolka yar ee noloshaada oo dhan hada, "Oh shit, dhamaanteen waan kicinay maxaa yeelay waxaan ilaaway inaan ku baro sida wax loo sameeyo wax sax ah." Qaxwaha waa daroogo, kafee-ka nolol maalmeedkayaga-
Sow taasi ma ahan sida caadiga ah, iyo mar labaad, sababta aan waligey u noqon boqoshaada, sababtoo ah hal mar baan sameeyay oo waxay i siiyeen qarsoodiga iyo muruqyada isku waqti. Qaab xun oo loo bilaawdo. Laakiin waad ogtahay, ... dhaca. Oo sidaas, iyo ka dibna, sidoo kale, waxay ii heshay nooc kubado toosan, ma ahan ilaa heer in, laakiin waxay ahayd waqti maalgashi sidoo kale. Markaan eego, miyaanay lahayn shaman oo loo maleynaayo inay hagitaan gaar ah…
Aniguna waan kuu sheegi doonaa, waxaa jira dad banaanka jooga oo jooga Miami oo sidaas sameeya. Waxaan lahadlay iyaga inay muhiimad ahaan yihiin shareecada halkaan oo dadka ku hogaamisa safaradaan ruuxiga ah. Waxa kale oo jira kooxo halkan jooga oo aasaasayo dib ugu laabashada Jamaica halkaas oo ay si buuxda sharci u tahay. Marka, waa wax aad u badan, waxa ay wax badan ka hadlaan waa dejintaada iyo dejintaada. Waxaad ubaahantahay inaad hubiso markii ay dhahaan, waxaad leedahay ujeedka saxda ah ee aad gasho, waana inaad lahaataa goobta saxda ah.
Sababtoo ah shucuurtaadu waxay u jiidaan hal jiho ama dhinaca kale. Markaa hadaad ku sugan tahay goob naxdin leh oo ku hareereysan dad aadan ku kalsoonayn oo aadan jecleyn, waxaad mari doontaa safar naxdin leh. Iyo dhanka kale. Haddii aad ku sugan tahay goob qurux badan oo ay ka mid tahay dadka aad daneynayso oo dan kuu ah adiga iyo cidda adiga ku raadineysa. Taasina waa waxa shaqooyinka shaman uu yahay, runtii inay kugu hogaamiyaan safarka.
Tanna waan necbahay. Waa wax lagu qoslo ah inaan dareemayo, labo sano ka hor waligey sidan oo kale kamaan hadli laheyn. Xaqiiqdi anigu ma ihi hippie ama wax la mid ah. Laakiin waad ogtahay
Xaqiijinta dhaleeceynta Marijuana ee Xeerarka Florida ee Xashiishka
Maya, kuwanu waa dhab. Si daacadnimo ah shucuurku waa [aanudible 00:36:48] waqtiga oo dhan.
Laakiin taasi run ma ahan, maxaa yeelay hadda waxaad la kulmaysaa ceebta aan la dagaalamayno waqtiga dhabta ah. Sababta oo ah kamaan fikirin sidan laba sano ka hor dadkuna waxay oranayaan sidan oo kale, “Eeg, dhaleeceynta ayaa la igu soo rogay iminkana taas ayaan soo maray. Kadibna waxaan gartay inay tahay lacag uun. ” Laakiin [crosstalk 00:37:05] ee shaqooyin ceebeeya dadka ayuu u shaqeeyaa.
Maandooriyaha, miyaad ugu yeeri doontaa ruuxiyad, ha ahaato cannabis ama boqoshaada. Sidoo kale waa cilmi nafsi, sax? Ruuxi ahaaneed, cilmi nafsi. Waa fayo-qabka maskaxdeena. Waxaan ka wada hadalnaa caafimaadka maskaxda, taasina waa waxa ruuxiga ahi sidoo kale yahay. Waxay la mid tahay markii aad haysato caafimaad maskaxeed oo habboon iyo aragtida halka aad jeceshahay, “Waad ogtahay waxa, haddii aad u qaadaneyso PTSD ama jir ahaan, xanuunka dhabta ah, waxaad wali u shaqeyn kartaa sidii qof aadane ah. Oo dadku waxay ku noolaadaan iyada oo aan ka warqabin. Waxay ku nool yihiin iyagoon dareemin wanaaggaas. Sababtoo ah waxay ka baqayaan inay qaataan maxaa yeelay waa sharci darro.
Taasina waa sababta aan u maleynayo, inay wax walba ku saabsan tahay mas'uuliyad. Waxaan u maleynayaa inaan u baahan nahay inaan mas'uul ka nahay bulshada ahaan. Waxaan ubaahanahay inaan masuul ka nahay sharciyadayada oo aan ubaahanahay inaan masuul iska saarno nafteena. Oo waxaad ogtahay, haddii aad u qaadato daroogada si mas'uuliyad darro ah ama aad leedahay qawaaniin mas'uuliyad darro ah oo aad kaliya go'aan ka gaareyso sharciyo la'aan, aniga aniga taas taas ma aha.
Marka waa muhiim in wada hadalladaan yeeshaan. Waxaan sameyneynaa cilmi baaris aan u baahanahay inaan sameyno, waxaanan leenahay wada hadallo wax ku ool ah oo aan kari karno… Waxaan noqon doonaa qof daacad ah, shaqsi ahaan uma aqaano qaab dhismeedka sharciga inuu noqdo. Waana sababtaas faa'iido-aan-u-macaamil ahayn, toos uma toos ugu tagayo hadda. Waxa aan isku dayayo inaan sameeyo waa kor u qaadista wacyiga, bulshada kaliya maahan, nafsadeyda. Sababta oo ah waxaan rabaa inaan qeexo qaabdhismeedka sharciga saxda ah oo waxaa jira meelo kale sida, fiiri Kevin ka soo baxa Denver, waan la hadlay isaga. Wuxuu qabtay shaqo aad u wanaagsan siduu u horseeday Denver sharci darro, wuxuu lahadlay ragga banaanka jooga Oakland. Runtii waxaan la hadlay dadka wadanka oo dhan waxayna qabteen shaqo aad u weyn.
Laakiin hadda aniga shaqsi ahaan, kuma lihi wax fiican inaan dejisto sharciyo gaar ah illaa inta aan runtii kor u qaaday wacyigeyga iyo in waxa aan isku dayayaa aan sameeyo ay tahay in aan kor ugu qaado wacyiga ka dhex jira Floridians-ka dalka, adduunka iyo aniga iyo si markaa aan ugu nimaadno xalka saxda ah marka loo eego xeerarka loogu talagalay.
Hagaag, waa nooc adag. Waxaan u horumarinaa sida geedka ama shay ka dibna waa nooc sida in la yiraahdo, "carruurta ciyaal, hore u soco oo sigaar cabba qaar haraati ah, laakiin anigu ma doonayo inaan mas'uul ka noqdo qofkasta oo carruurta wax u dhimaya sida ugu badan, u sheeg inay sigaar cabbaan. Waan ogahay inay wax dhib ah lahayn, runtii siin maayo fuck. Waa sida iyagu… But-
Anigu waxaan ahay taageere runtii haysata da'da ugu yar. Waxaan u malaynayaa hadaan qaadan lahaa dawooyinkan da 'yarta, waxaan u maleynayaa aniga, maskaxdaada uma maleynayo inay kufiicantahay. Laakiin markii aad tahay qof bini aadam ah, haddii aad daroogooyinkan u qaadatid ulajeeddooyin gaar ah, ha ahaato MDMA, waxaa jira caddeyn badan oo MDMA ay ka caawineyso PTSD, boqoshaada psilocybin, kuwani dhammaantood waa qeybaha ka dhex jira cilmi-nafsiga. Haddii aad tahay qof weyn oo aad u qaadatid ulajeeddooyinka saxda ah iyo fahamka saxda ah, runti waxaan aaminsanahay inay noqon karaan dawo. Laakiin haddii daawooyinkan si xun loo isticmaalo, waxay sidoo kale noqon karaan kuwo waxyeello u leh. Marka waa muhiim in aan wada hadal la galno.
Taasi waa sida ay ula mid tahay sharciga xashiishadda cannabis ee Florida ama xaalad kasta, waxaad weydiineysaa dadka in ay qaataan sabab caqli gal ah, aragnimo aqoon, aragti daacadnimo ku dheehan tahay arrimo adag oo ay dareensan yihiin hab gaar ah. Way u fududaan tahay qof inuu yiraahdo, "Maya, ma taageersana. Waxba ma doonayo. ” Sababtoo ah markaa markaa uma baahna inay abuuraan wax u keenaya inay dareemaan inay tahay inay wax weydiiyaan, ama inay beddelaan wax aan waligood hore u jirin.
Marka waxaad heleysaa shuruucdan cusub ee xashiishadda cannabis Florida halkaas oo ay tahay inaad lahaato $ 50 milyan ama Illinois halkaasoo ah 4,000 dalabyo ah oo loogu talagalay 75 liisanka. Marka waad ogtahay in dadku ay dacwayn doonaan gobolka Illinois oo ay iskudayaan inay u deggaan shatiga. Iyo ugu yaraan xanuunkaas sii kordhaya ee ina jira annaga oo ka shaqeynayna hawshan annagoo hubineyna inaan haysanno isbeddel sharci-dejin ah. Laakiin waxaan ula jeedaa, waa wax la quudhsan karo oo keliya way sahlan tahay. Waxa ugu fudud waa in la yiraahdo, "Ma sinna, ku xari dhammaantood."
Waana runtii, waa noocaas oo kale waxay la mid yihiin waxay degmooyinka ka qabtaan halkan Florida. Waxay xaq u leeyihiin qaanuunkeena hoos ku xusan in la mamnuuco kaabayaasha. Inbadan oo ka mid ah ayaa dhahay, "Ma doonayno in aan la nimaadno waxa qaab dhismeedka sharciga uu ku jiri doono qaynuunteenna. Aad ayeey noogu fududahay inaan leenahay hal liner oo dhahaya, 'Waxaa la mamnuucay marka loo eego Sharciga Florida 381.986.' Uma baahnin inaan ka walwaleyno. Degmooyinka kale ha ogaadaan. Waxay noqon doonaan shaybaarada tijaabada. Mar haddii ay qabtaan waxa ay qabtaan, ka dib ayaan ka fiirsan doonnaa, oo aan dib u eegi doonnaa. Taas oo runtii ah waxa hadda dhacaya ayaa ah in degmooyinka kale sida federaalku u oggol yahay gobollada in ay noqdaan shaybaar tijaabiya-
Markaa taasi waa wax fiican. Waxaan hadda ka wada hadli karnaa Sharciga Gobolka. Waxaan u maleynayaa inay xad gudub ku tahay 14-ka Beddelka. Maxaad ka qabtaa Sharciga Gobolka?
Hagaag waxaan ula jeedaa, Sharciga Gobolka wuxuu ku leeyahay luqado badan oo wanaagsan, wuxuu ku leeyahay luqado badan oo xun. Waxaan jeclahay in wadahadalku ugu yaraan horay ugu socdo nooc ka mid ah dowladda federaalka ugu yaraan xushmeynta sharciga gobolka illaa xad. Xaqiiqdiina waxay dadku garan waayaan ee ku saabsan Sharciga Gobolka ayaa ah, kaliya waa mid run ahaantii ah codbixinta federaalka iyo u oggolaanshaha Gobollada inay noqdaan shaybaar tijaabiya. Waxaan jecelahay inaan maqlo waxa falanqayntaadu tahay ilaa iyo inta sababta
Sababta oo ah markaa waxay qaadataa sharciga federaaliga ah waana nooc cillad ah oo ku jira shuruucda gobolka. Marka hada waxaad ula dhaqmaysaa dadka federaaliga ah khiyaanooyin dowladeed oo kale sidaas darteed sida haddii aan ku sugan yahay Indiana, waxaan ahay dambiile, laakiin hadaan ahay qof udhashay isla gobolka Illinois waxaan ahay nin xor ah. Markaa waxay dajineysaa dowladdan addoonsiga, nooca dhibaatada xorta ah ee gobolka. Hagaag maahan wadan adoonsiga, waa dowlado dambiilayaal ah, laakiin haddii aad qof dambi ku xukumi karto, waxaad ka yeeli kartaa addoomo sida waafaqsan Qodobka 13-aad. Markaa waxay abuureysaa sharci federaali ah oo midaysan oo dadka ula dhaqma si kala duwan oo ku saleysan gobolka oo ay ku sugan yihiin ficil la mid ah.
[inaudible 00:42:48] sax, maxaa yeelay anigu ma ihi nin qareen ah, kaliya waxaan halkan ku ahay farsamo yaqaan. Markaa waa sida cashuurta dawladdu tahay tan oranaysa, "Hagaag, annagu mid walbaa si gaar ah ayaannu wax u qabsannaa sidii annagu wax u samayn lahayn," sida sharci-dajinta cannabis, sax. Caadooyinka qaarna ma laha hadana wali waa sharci darro sharci ahaan guud ahaan. Ilaa iyo hadda arrinta, intee arrimo kale oo la mid ah ayaa ka jira Mareykanka in kastoo?
Kulligeen waan oggolaan karnaa in cunugga fucking xun, laakiin kuma aqbali karno in geedkan xasaasiga ahi uu noqdo… Taasi waa dhibaato. Falalka gobolka waxaan u maleynayaa inay tahay wax weyn, maxaa yeelay haddii ay jiraan su’aalo kale oo qotoda dheer u leh bulshadeena inay ku xadgudbaan. Waxaa jira xoogaa su'aalo ah oo ay tahay inaan weydiinno, laakiin su'aashan mar hore ayaa looga jawaabay. Waxaan ubaahanahay inaan kobcino, sharciyeynno waxyaabo si heer ah, isla markaana aan isbarano, sida aan wada ognahay in khamri aad u badan uu xun yahay, ayna dhici doonto [crosstalk 00:43:38]. Laakiin waxaad u socotaa
Waxaan u maleynayaa waxa muhiimka ah in la fahmo waa in markii aad ka fikirto shirkadaha waa weyn, ay aad ugu adag iyaga inay go'aan gaaraan. Waqti dheer ayey qaataan. Waxay leeyihiin guddi agaasimeyaal, waxay leeyihiin saamilayyaal ay tahay inay ka jawaabaan, markaad ka hadlaysid shirkadaha yaryar, waxay samayn karaan go'aanno dhakhso leh. Aad ayey ula mid tahay dowladaha iyo dowladda dhexe. Dowladda federaalku waa markab weyn oo isku dayaya in ay leexleexaan mana sameyn karaan leexad buuxda sida ugu dhakhsaha badan ee gobolku u leexan karo.
Hadana waxay isku dayayaan inay qaadaan talaabooyinkan ilmaha oo ay uga doodaan arrinta oo ay wax u dhaqaaqaan si tartiib tartiib ah laakiin waxaan runtii kalsooni weyn ku qabaa inay jiri doonaan ka tanaasulida mamnuucan federaalka ee xashiishadda. Kaliya markabka waa weyn yahay waana adag tahay in la dhaqaaqo.
Haa. Laakiin imisa su'aalood oo kale oo anshaxeed ayaa ka jira kuwan oo kale? Midkoodna kama fikiri karo.
Taasi waa sababta aan u sameeyo sharciga xashiishadda cannabis, sababta oo ah waa mid aad u gaar ah oo aad u kala duwan. Tani waa sababta ragga aniga oo kale ah iyo Thomas aan u maleynayo inay yihiin… Waa muhiim markii aan dadka u sheego haddii aad tahay qof isku dayaya in aad bilowdo shirkad xashiishad oo aadan la macaamileyn qareen runtii garanaya waxa ay ku sameynayaan xashiishadda. Waxaad u socon doontaa dhammaan noocyada xidhxidhashada, sababtoo ah maahan wax kale oo ganacsi ah. Dadku waxay isbarbardhigi karaan aalkolada qaar ka mid ah goboladaan madadaalada, maahan khamri. Waa hab qoto dheer.
Ma waxaad la socotaan qareenka kale ee xashiishadda cannabis ee ku jiray wadahadalada goor dhaweyd wararku?
Oh haa. Ninka wakiilka ah
Parnof. Ma garan karo hadda, ninkan, waxaan ula jeedaa, iyo Keith Stroup ayaa email u diray dhammaan la-taliyaasha sharciga ee caadiga ah ee isaga ku saabsan, laakiin waxaan u maleynayaa inuu ka badan yahay qareenka difaaca dambiyada isagoo ka duulaya inuu jecel yahay xashiishadda iyo dambiilaha. macmiilku si xirfad ah bay u hadlayaan, laakiin uma malaynayo inay ugu yeedhaan si isku mid ah dugsiga sharciga. Waxaan u maleynayaa inay ugu yeeraan si qiiro leh, laakiin weli haa, ma xasuusan karo magiciisa, laakiin waa qareen dambiile ah
Roddy. Waxaan u maleynayaa kaliya xaqiiqada ah inuu isagu [aanudible 00:45:38] naftiisa u dagaallamayo damiirka marijuana ee maxkamadaha, laakiin isla mar ahaantaana wuxuu helay door uu ku caawiyo inuu difaaco ninkan lagu tuuray halkaas, sida wararka qaranka. . Haa haa, waa lacag, but-
Hubi ka dibna taasi waa waxaas. Haddii uu bixiyo lacagtaas ee uu ka helay, si xun ayuu uga yimid Yukreen wuxuuna siiyaa Sly ama magacii uu doono ha ahaadee, markaa taas ayuu u geyaa bangigiisa oo dhigaayaa. Iyaga kuma eryi doonaan maxaa yeelay isagu waa heerka 2 MRB. Hadda, haddii aan isku dayo in aan taas u sameeyo shirkadeyda sharciga ah, maxaa yeelay macmiilkeygu wuxuu i siiyaa 50 ayeeyo, sifiican ayuu ii siiyaa $ 100,000 si aan ugu dacwoodo gobolka Illinois si aan u degsado shati. Bangigeygu waa i xirayaa, sababtoo ah waxay noqon doonaan sida, “Maya, taasi waa ka duwan tahay waxaad arkeysaa, haddii aad qof ugu difaacayso dambi, way fiicantahay. Laakiin hadaad difaacayso qof inuu jabiyo dambi, waxaad tahay tier 2 MRB. ”
Haa Haa. Waxaan ula jeedaa, waxaan u maleynayaa inay taasi tahay kala sooc waxaan u maleynayaa inaan nahay qareeno ku sugan xashiishadda cannabis runtii tiptoe maxaa yeelay farsamo ahaan haddii aan nahay… Haddii aad difaaceyso dambiile, waxaa laguu oggol yahay inaad difaacdo dambiile. Laakiin illaa xadka ay marijuana sharci ahaan tahay sharci darro, marka haddii aad iskudayeyso inaad fududeyso macaamil cannabis isla markaana aad sameyneyso heshiis M&A, waxaad sameyneysaa heshiis hanti ma guurto ah, wax alla wixii ay noqon karto
Taasi waa sida ogaanshaha dambiyada federaaliga ah ee runtii ka duwan kuwii hore.
Si loo fahmo, lagama maarmaanka raggaaga, muhiimadda raggaaga. Tom iyo adiguba Dustin ilaa iyo inta ganacsiga uu ka kooban yahay, waxay la mid tahay sida gudaha Ameerika aan ugu gabagabayn karno ganacsiga iyo, waa ilbaxnimadeena. Waa sida annaga, qandaraasyadaada iyo waxa aan ahayn. Ma ahan sida-
Hagaag, Ameerika asalkeedu waa qandaraas. [inaudible 00:47:20] dastuurku waa, sidaa darteed sida America runtii waxay dhashey fikradaan shirkadeed. Waxaan gartay inaad shirkadaha shirkadaha dib uga raadsan karto shirkad Dutch East India Company ah. Laakiin taasi waxay u ahayd Nederland, sidaad ogtahay, fikirka waddan kaasoo ah shirkad u oggolaaneysa in shirkadaha kale iyo qandaraasyada kale la dhaqangaliyo. Wali Mareykanku waa ka duwan yahay waddan kale oo ka horreeyey oo dhan.
Haa. Iyo in aan dib ugala hadalno wixii aan kaga wada hadalnay gobolka [aanudible 00:47:49], hadda gobollada qaar waxay noqon doonaan dambiile kuwa gobollada kale dambiguna ma noqonayaan. Waxay abuurtaa nooc kasta oo jahwareer ah. Waxa aan waligeen ku arag warshado waa xaalad ay ku shaqeeyaan MSOs, Hawl-wadeenada dowlado badan oo shaqeynaya. Waxay ku qasbanyihiin inay lahaadaan sumado kaladuwan iyo SOPs kaladuwan gobol kasta oo ay waajib ku tahay inay u hoggaansamaan. Waa mid aan fiicnayn. Taasi waa sababta aan ugu lug leeyahay ASTM D37 taas oo ah heerarka caalamiga ah ee warshadaha cannabis. Iyo ilaa aan ka helno heerar caalami ah oo ku saabsan sida aan u tijaabinayno badeecadeena, sida loo calaamadinayo, sida ay tahay in loo xirxiro, sida ay tahay in loo tuuro.
Ilaa aan ka helno qaabab caadi ah oo wax looga qabto, waxsoosaarka ayaa usii socon doona inuu noqdo mid aad u yar, isla markaana qiimaha uu ganacsiga ugu sameeyo shirkadahaan xashiishadda inay aad u sarreyn doonaan. Taasina waa sababta aan u maleynayo in qaar ka mid ah qiimahan saamiga ah ee aad arkaysid uu dhimayo waxaan ula jeedaa sababa badan. Laakiin midkood baa xaq ah, qofna ma sii saadaalin karin qarashka aadka u sarreeya ee jira ee ku saabsan u hoggaansamida sahlan ee ka imanaya dowlad-goboleed. Maheli kartid oo kaliya, "Hey kuwan waa kuwan sumadahayaga waana sidaan aan ugu iibin karno dowlad kasta." Maya, Gobol kasta markaad MSO tahay, waxaad u baahan tahay inaad haysato gobol kasta oo leh summadooyin u gaar ah oo malee maxaa jira? Waxaad sifiican ugu fadhido wixii isbedel xagga sharciga ah ah oo ku saabsan magacyadaas maxaa yeelay sharcigu si dhakhso ah ayuu isu beddelaa gobol kasta. Markaa ha iibsan sumadaha 100,000 ee sababta oo ah waad badbaadin kartaa nafsadaada laba lamaane maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay is beddesho maalinta ku xigta. Markaa waxaa jira kaliya caqabado badan.
Haa. Maxaa yeelay gobol kasta waa shay u gaar ah. Markaa waa inaad yeelataa silsilad saad ah silsiladda sahayduna waxay ku xidhan tahay dawlad ahaan iyadoo loo eegayo dawlad ahaan iyada lafteedu. Sababta oo ah sheyga oo dhan waa in lagu beero dowlad si gaar ah loo leeyahay. Marka si dhab ah ugama heli kartid wax dhaqaalo ah oo kaa soo baxa oo aad ka noqotid inaad noqotid hawl-galayaal sidaad awooddo u leh MSO-yadaas. Laakiin markaa waxa aad heli karto waa kharash sare oo ganacsi sameysanaya, maxaa yeelay sidoo kale sida ugu dhakhsaha badan qof uu ogaado inuu ku jiro ciyaarta xashiishadda, waa inaad wax ka qabataa lacagta oo dhan oo ay qiimeeyaan qiimahaaga sababta oo ah waxay u maleynayaan inaad lacag sameyneyso gacanta gacanta ku dheji.
Oo waxaan ka wada hadalnay dib-u-jeexyada lambarrada qaar ee soo galayaasha iyo nooca qulqulka qashinka ee ay tuurayaan. Haa, waa ganacsi qulqulka lacagta, laakiin waa raasamaal iyo ganacsi xoog leh. Marka maadaama oo ay lacag badan soo bixin karto, macnaheedu maahan inaysan wax badan ku kacaynayn in la sameeyo haddii aad xitaa xaq u leedahay inaad sameyso. Waxyaabahaas oo dhana waxay abuurayaan dhibaatooyin.
Laakiin mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaan ku wada-hawlgasho muddada tobanka sano ah ee soo socda ayaa ah lambarka ganacsiga marijuana labiska, ama lambarka ganacsiga xashiishadda, ama wax la mid ah meesha aad ku qaadatid isla markaana aad jaangooynaysid kuwan. Sababta oo ah waxay noqon doontaa sidii sharci kasta oo kale, sida ERA oo kaliya ayaa heshay gobolkaas 38aad. Waxaa loo gudbay 70-meeyadii, sax. Laakiin markaa waxaan haysannay taas, waxaan u maleynayaa inay ahayd wax ka beddelka 25aad ee la meel mariyey 1789. Laakiin waxay qaadatay ilaa dhowr sano ka hor inta aan si dhab ah loo codeyn. Ma garanayo, ma ihi aqoonyahanka dastuurka, waligey maan ahayn aqoonyahan dastuuri ah.
Iskuulka sharciga Waxaan kaga fiicanahay sharciga dastuuriga ah midka aan hadda ahay.
Haa. Sababta oo ah adiga run ahaantii, waxay ahayd mid ku habboon noloshaada markaa. Laakiin way fiicantahay. Waana sababtaas aniga waan u jeclahay, maxaa yeelay waa arin taariikhi ah waana arin ka duwan waxkasta oo kale waxayna leedahay dalabyo badan oo kala duwan. Marka kaliya maahan beeraha, is waafajinta, shirkadaha, waxay taabataa dhamaan waxyaabahaas waana wax soo jiidasho leh.
Iyo mid ka mid ah waxyaabihii aan doonayay inaan dib ugula noqdo waxa ka mid ah oo aan uga wada hadalnay sida Florida asal ahaan ay u hooseeysay THC ka dibna ma aanan ogeyn… Umaannaan ubax cabbin oo taas ayaa wax laga beddelay kalfadhigii sharci-dejinta ee ugu dambeeyay. Hadda waxaan haynaa ubax la ruugi karo, oo waxaan kuu sheegayaa shatiyada hadda jira si dhaqso leh uma soo saari karaan-
… Qofkasta wuu saadaaliyey baahida ubaxa. Qof walbana wuu ku farxay daayeerka iyo waxyaabaha kale oo dhan, ubaxa
Haaji, miyaad saadaashay taasi?
Dude, markaad markii hore ka hadleysay tirooyinka, tani waa wax la saadaalin karo. Suuqa loogu talagalay xashiishaddu waa mid aad u weyn. Xaqiiqada ah in aad raggu ku soo bilaabay afar soo-saare, [inaudible 00:51:48] dhaqankaaga, wax alla wixii, khibradda macaamiishaada. Laakiin hadda waxaad heshay dad badan, noocyo badan, khibrad dheeraad ah. Waxay isu beddelaysaa shay u gaar ah, iyadu leedahay… Ma jiro qof qaban kara dhacdooyin. Waxaa jira qof noqon doona… Sida waxkasta oo kaladuwan ay dhacaan sida aad ugala hadleysid gaadiidleyda iyo waxa aan aheyn.
Taasi waa runtii fikradda ugufiican ee jirta ayaa ah in dilku furan yahay sidaa darteed waxaad ku heli kartaa dhammaan ganacsiyadaas ducadda. Laakiin waxaad tidhi wax aan u malaynayay inay xiiso leedahay, sababtoo ah anigu ma ahi qareen Florida. Uma jeedo inaan waligeey galo baar baar Florida. Waan arki doonaa waxa dhaca mustaqbalka. Laakiin marka idinku waxaad wax ka baddelataan dastuurka ka dibna sharci dejintu wuxuu bilaabaa inuu isbadal ku sameeyo arintaas? Sababta oo ah waxaad dhahday wax ka bedelka ayaa yiri, "THC hoose, ma ubax la ruxin karo." Oo sidaas daraaddeed hadda waxay ka saareen hoose ee 'THC' iyo muuqaalka ubax la ruxruxo.
Markaa THC-da hoose waxay runti ahayd iyada oo loo marayo qaynuun ka hor wax ka beddelka dastuurka. Ka dib wax ka beddelka dastuurka ayaa yimid oo runtii loo oggolaaday badeecad sare ee THC. Dastuurku wuu ka aamusay marka la eego qiijinta laakiin wuxuu la yimid… Laakiin waxaa jira dacwado la soo gudbiyay oo loo maro dacwadaha, asal ahaan asal ahaan gudoomiyaha, markii gudoomiyaha gobolka soo galay, asal ahaan wuxuu soo saaray siyaasad ah inuu ahaa qof taageersan marijuana sigaar cabbista. Oo iyagu sharcigay ka qoreen oo sidii sharciga loo oggolaaday.
Waxaa jiray dood weyn oo ku saabsan saaridda koofiyadda 'THC'. Iyo waxa aan ka fahmay kalfadhiga xiga ee sharci dejinta, waxaa jira riixitaan kale oo la isku dayayo in lagu dhejiyo THC koofiyad barnaamijkeena marijuana caafimaad. Sida iska cad, taasi waa waxa xiisaha leh ee ku saabsan warshadaha. Waxaan had iyo jeer isku dayeynaa inaan horumar sameyno, laakiin sidoo kale waxaan sii wadnay inaan sii wadno dagaalka oo aan sii wadno booskeena. Marka hadda waa loo ogol yahay inay marijuana caafimaad THC sare ku yeeshaan Florida. Laakiin taasi [crosstalk 00:53:38] -
Rag ma waxaad leedihiin sida qalimaanta vape? Sababtoo ah tani waa… Waa nimcada dabeecada ee ladnaanta, laakiin waxay u badan tahay 80% cannabinoids markay ahayd
Haa, waxaan haysannaa qalimaan vape. Waxa aan haysan, sidaa darteed waa wax xiiso leh in qaanuunku u oggolaado cunnooyinka, laakiin waaxda Ag iyo waaxda caafimaadkeenna waxaa laga rabaa inay ka wada shaqeeyaan shuruucda la cuni karo iyo xeerarka la cuni karo kama soo bixin. Marka hadda Florida ma haysanno wax la cuni karo, oo aan u maleynayo inay tahay… Waxaan u maleynayaa in dad badani doorbidaan waxyaabaha la cuno waana nasiib darro in bukaannadeenna aysan marin u helin wax ku cuni karaan. Waxa kale oo xiisaha u leh Florida ee aan wali sugeynay waa inaysan oggolaan shaybaarka tijaabada saddexaad ee Florida gudaheeda.
Haa, Anigu waxaan matalaa Sheybaarka Sayniska Cagaaran, oo ah mid ka mid ah sheybaarada tijaabada ah ee halkan Florida. Iyaguna, waaxda caafimaadku uma aysan helin inay soo saaraan xeerarka tijaabada ee xisbiga saddexaad. Hadda waxay kaliya dejiyeen sharci deg-deg ah oo aan la dhaqan gelin kaas oo markaa markaa dhigaya… Markaa hadda shaybaaradan qolyaha saddexaad tijaabinaya, Waaxda Caafimaadka ayaa u oggolaaneysa inay xalliyaan marijuana qandaraas ahaan. Ma jiro liisan ay shaybaadhka saddexaad ee shaybaadhku haystaan, waxay tahay inay la galaan MMTC, Xarun Caafimaad oo lagu daweeyo Marijuana si ay awood ugu yeeshaan inay sameeyaan tijaabadaas, taas oo abuureysa dhammaan noocyada kala duwan. Runtiina si daacadnimo ah, hadda Florida dhexdeeda tijaabada ayaa waxoogaa iskeed isu maamushaa, taas oo macnaheedu yahay eeg, kuwanu waa meherado iyo haddii aysan u baahnayn inay tijaabiyaan wax, haddii ay wici lahaayeen
[crosstalk 00:55:05] is-maamul, waxaad la tacaashay FAA. Laakiin taasi waxay ka imaaneysaa Illinois sidoo kale halka aysan haysanin… Waxaan ula jeedaa, waxay xuseen waxyaabo ku saabsan imtixaanka. Waxa jira sheybaarro tijaabo ah laakiin iyagu uma ay fureen sheybaar cusub oo tijaabo ah taasina waa inbadan oo ka mid ah ganacsigaas xasaasiga ah. Waxay isku dayayaan inay xaddidaan culeyska Gobolka Washington, miyayna ahayn?
Haa. Haa. Hagaag, sharci dejiyeyaasha qaar ayaa isku dayaya inay riixaan xoogaa lacag ah 10% biil. Marka waxaan rajeyneynaa taas, waxaan ula jeedaa taas oo kaliya, sida aad sheegtay, ilaa iyo haatan waad heysataa ka dibna waa inaad u dagaallanto waxa aad heysato.
Gaar ahaan [inaudible 00:55:37] dariiqa, ma joogsato. Way soo noqotay oo waa sidii, "Oh, oh, waxaad ugu adeegsanaysaa qaab aad u badan?" "Haa."
Waa hagaag su'aalaha aan weydiin karo oo keliya waa, “Sabab? Waa maxay sababta ay si lama filaan ah oo dhan muhiim ugu tahay inaan xadidan u leenahay? ”
I tus [crosstalk 00:55:50] xagee warshadan ku taabatay? Waxaan ula jeedaa, dhab ahaan, muxuu kugu kugu dhacay?
Haa. Waa hagaag, waxaa jiray… Bilihii la soo dhaafay waxay keeneen dad aad u tiro badan, dhakhaatiir badan, ciyaartoy badan oo ka yimid gobolka oo ka soo horjeeday cannabis iyo Tallahassee waxaa ku jiray dad badan oo hadla. u baxa halkaas. Oo iyagu waxay lahaayeen fadhiyo macluumaad iyo dhagaysiyo halkaas oo dhakhaatiirtani aasaas ahaan ka hadlayeen halista ku jirta xaddiga sare ee THC. Aniguna waan kuu sheegi doonaa, waxay ku abuurtay xanaaq badan dhakhaatiir badan oo aan la shaqeeyo. Oo waxaad ogtahay, hadda waxay bilaabayaan inay qaataan fadhiyo macluumaad oo u gaar ah, iyagoo sharraxaya sababta ay muhiim ugu tahay helitaanka THC-ka sare.
Oo si daacadnimo ah hadda, waxa ay noqon laheyd… Haddii ay sameyn lahaayeen wax ay ku qiimeeyaan lacagta THC. Waxa xiisaha leh ayaa ah dhammaan noocyada iyo dhammaan noocyada noolaha ee ay korayaan hadda ama inta ugu badan ayaa loogu talagalay THC sare, sax? Markaa haddii sharcigaas la geli lahaa, asal ahaan shirkadaha Florida waa inay wax ka beddelaan iyo dhammaan noocyada iyo dhammaan noocyada iyo waxkasta oo ay sameynayaan, taasoo sababi doonta in arrinta oo dhan la maro marinka bukaanka iyo dhammaan noocyada kala duwan ee arrimaha kala duwan. Waxaan ku rajo weynahay
Waxay u muuqdaan inay isku dayayaan inay xaddidaan heerarka THC.
Waa maxay taasi
Waa maxay saqafka ugu badan ee ay isku dayayaan inay xaddidaan?
10% waa waxa ay ka wada hadleen.
Maya, taasi waa sida, haddii aan haysan lahayn Ethan Russo, Dr. Russo hawada, wuxuu u ekaan lahaa, "Maya, taasi waa heerka cannabis laba Chemovar." Dareen ahaan in taasi waa kuwa isku-dheelitirka ah, maxaa yeelay waxaad haysataa saamiga 20 illaa hal, oo inta badan ah hepatarkaaga loo yaqaan 'CBD hemp', sida muruqyada lifter-kaaga. Ka dib markaa waxaad leedahay saami ka soo horjeedda taas oo mararka qaar ay tahay uun THC oo taasi waxay la mid noqon doontaa Roobkaaga Gorilla. Oo markaa markaa haddii aad u sameysay sida wiish kor u qaadida gorilla, markaa taasi waa inay noqotaa mid dheellitiran oo isku dheelitiran oo ka kooban tan-hal-THC CBD. Kuwaas xitaa kuwaas ayaa dhaafi kara 10%, marka waa inaad wali daawataa ubaxaaga. Markaa markaa waad helaysaa, waxaad moodaa inaad hadda oran lahayd waa inaad qodaa dhammaan tufaaxa markay bislaadaan.
Waxaan qiyaasayaa waxa, inbadan baan sigaar cabbi doonnaa. Haddii aad ka hadashay in ka badan 10% marijuana THC, waxaad u baahan tahay inaad cunayso marijuana badan oo aad u badan tahay inaad aad uga sii badnaan lahayd. Waxaa lagaa doonayaa oo keliya inaad lacag badan gasho. Markaa waxay dhaawaceysaa macaamilka, bukaanka oo ah inuu iibsado marijuana dheeraad ah si loo gaaro-
Majirto guri bukaan oo ku koray Florida weli, sax?
Sax. Marka koritaanka guriga waa arin weyn. Sida iska cad 22ka shati ee waxaan u malaynayaa inay u badan tahay inay u ololeeyaan. Iyo 22ka shati ee-
Bukaanka mise dadka waaweyn?
Uma maleynayo 22-ka shati inay doonayaan inay guri koraan si ay u dhacaan marwalba.
Haa, fiiri, anigu garan maayo. Laakiin dhamaadka maalinta, 22ka shati, sidaan sheegay, Florida waa suuq aad u weyn. 22-ka shatiyadood waxay leeyihiin lacago badan gadaashooda waxayna dad badan oo u ololeeya in Tallahassee ay hada u ololaynayaan iyaga. Markaa taasi waa mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee ay tahay inaad ka gudubto waa xaqiiqda ah inaad haysato 22-ka shati ee ay ku kharash gareeyaan lacag badan oo lobbying doollar si aad gurigaaga ugala baxdo [inaudible 00:58:40]. Hadda fiiri, ma ogi, waxaa jiri kara… Ma aanan la hadlin, Ma doonayo inaan ku hadlo magaca liisamada oo dhan. Laga yaabee in qaar ka mid ahi ay taageerayaan. Laakiin marka loo eego aragti ballaadhan, waxay u badan tahay inay door uun ka qaataan booska ka koray guriga.
Waad ogtahay, wiilasha waxaad luminaysaa lacag aad u badan iyagoo tilmaamaya in madadaalada ay sidoo kale ku kici doonaan doolarka dalxiiska. Sababta oo ah hadda caafimaadkaagu wuxuu dammaanad qaaday 100%. Waxaan ula jeedaa, ma jiri karto waxa ay ugu yeeraan is beddel, ka baxaan gobolka, waxa aan aheyn. Laakiin waxaan kuu ballan qaadayaa in badan oo ah in iibsiyada caafimaadku ay u socdaan dadka deegaanka, bukaanka aan caafimaadka ahayn. Marka sida ugu dhaqsaha badan markay haystaan ​​iibsigaas caafimaad ee madadaalada, ama iibsashada madadaalada, waxaad u jiidaneysaa ninkaas jiidaya waxa loogu yeero suuqa madow, laakiin waa saaxiibkii kaasoo caafimaad. Ma heleysaan suuqaas iyo dalxiiska. Sida aad raggiiba dib uga noqdeen dalxiis, taasi waa waxa aad ku nooshahay.
Oh, taasi waa waalan tahay. Waxaan ula jeedaa, waa maxay sababta ay dadkani lacag badan ugu isticmaalayaan laysanka halkan, sax? Waxaan ula jeedaa, fiiri, uma ay qabanayaan 300,000 bukaanka. Waxay u sameynayaan 20-ka milyan ee qof ee aan haysanno, iyo waliba dalxiiska aan haysano. Marka raggaani maahan… Ma haysanno dad saxeexan jeegag $ 50 milyan ah warqad yar sababtoo ah waxay u maleynayaan inay heli karaan 300,000 bukaan. Waxay u samaynayaan sababta oo ah waxay arkaan in marka madadaalo ay ka dhacdo halkan Florida, waxay u noqon doontaa fursad weyn. Oo runtii si daacadnimo ah, waxay noqon doontaa gangbusters.
Waxaa jiraya wax badan, lacag badan in la sameeyo. Waxaa jiri doona tartan badan. Waad ogtahay waxaan ula jeedo? Fiiri, dhamaadka maalinta, waxay u egtahay ganacsi. Waa inaad noqotaan rag, waxaan u sheegayaa dad badan, waxay rabaan inay galaan warshadan, waxay u maleynayaan inay tahay lacag fudud. Maya, waa sida ganacsi kale oo kale. Waa inaad noqotaa qof caqli badan. Waa inaad la shaqeysaa dadka yaqaan waxa ay sameynayaan, aad la shaqeyso garyaqaan saxda ah, xisaabaadka saxda ah, dadka maalgelinta saxda ah, maalgashadayaasha saxda ah, waana inaad tartantaa. Sida ganacsi kasta oo kale. Ma jiro hab sahlan oo loo sameeyo kariska
Taasi waa wax weyn, oo dib noogu soo celin kara wax aan halkan ku soo koobi karno. Marka Dustin, marijuana Florida 2020-ka, maxaad noocee u aragtaa inay dhacayaan?
Waa hagaag, marijuana Florida 2020-ka? Marka hadda waxaan haysannaa kiiskan Maxkmada Sare oo dhaca. Waxaan sidoo kale leennahay biilkaas aan ka hadlay kaas oo ku jira sharci dajiyayaasha. Uma arko in sharcigaasi gudbayo. Waxaan ku rajo weynahay, haddii ay taasi taasi noqon laheyd wax weyn, waxaan halkaan ku haysan doonnaa madadaalo. Uma arko in sharcigaasi gudbayo. Uma arko sharci-dejintu inay wax qabanayso illaa ay maxkamadda sare ee Florida go'aan ka gaareyso kiiskaas. Kiiska, waa kiiska Florida Grown. Taasi waa shirkadda soo gudbisay dacwadda waxaanan rajaynayaa in maxkamadda sare go'aan ka gaadhidoonto bilaha soo socda, iyada oo u qaadanaysa in ay ansixisay maxkamadaha hoose. Sharci dejiyaha waxaa laga yaabaa inuu dib ugu laabto kalfadhiga gaarka ah. Waa inay dib u eegaan qaanuunka. Dhamaanteen waan ognahay sida howsha sharci dejinta ay u qaadan karto waqti dheer.
Markaa DOH waa inay siidaayaan xeerar cusub ka dibna DOH waa inay siidaayaan codsiyada. Hadana waxay bilaabi doonaan aqbalaada codsiyada. Marka, aad iyo aad ayaan u rajaynayaa inaan lahaanno qaar shatiyo la soo saaray sannadka 2020. Aad iyo aad ayaan uga shaki qabaa inaan lahaan doonno ruqsad la soo saaray sannadka 2020. ugu yaraan 2021 nasiib daro.
Laakiin waan rajo qabaa, waana sababtaas tan aan uga firfircoonaa gobolada kale. Taasi waa sababta aan idinkala shaqeeyey qaar ka mid ah codsiyada Illinois. Waxaan qorsheynayaa inaan idinkala shaqeeyo qaar ka mid ah codsiyadan dheeriga ah ee aan helnay. Waxaan koox ka helay West Virginia. Waxaan ka helay koox shaqo oo Georgia ah oo aan la shaqeynayo. Runtii la shaqeynta kooxo kaladuwan oo kaladuwan si ay uga caawiso helitaankooda. Qaar badan oo ka mid ahna waa shirkado ku saleysan Florida oo raadinaya inay ku fidaan gobollo kale sidoo kale, sidaas.
Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo ay tahay in la sameeyo. Waxaan ku rajo weynahay in, sidaan idhi, xeerarka shaybaadhka saddexaad ee xisbiga, waxaan ku rajo weynahay inuu soo bixi doono. Waxaan ku rajo weynahay in la heli doono shatiga shatiga qaar ka mid ah sheybaarada tijaabada sedexaad si… Markalena dib, wareegga wareegga, waa tan dhammaan bukaanka. Waxaan rabaa in bukaanku helo sheyga ugu fiican ee ay heli lahaayeen. Haddiise sheygan aanu waxoogaa is-xukumin marka la eego tijaabada, waxaa jira khatar badan oo qaar ka mid ah badeecadan lagu saaray suuqa Florida aan si buuxda loo tijaabin.
Waxay qaadanaysaa hal soo celin ama qof ayaa heshaa dhab. [crosstalk 01:02:36] Marka xagee bay dadku kaa heli karaan?
Way i heli karaan, shirkaddayda sharciga ah waa www.mrcannabislaw.com, taasi waa M-Rcannabis law.com. Sidoo kale waad igala socon kartaa dhamaan warbaahinta bulshada #mrcannabislaw.
Cajiib. Hagaag, runtii waan kugu mahad naqayaa imaatinka bandhiga [crosstalk 01:02:55]. Iyo sida Florida ay u horumarinayso waxyaabo cusub, fadlan soo noqo oo wadaag ...